မင်းနိုင်အောင်: December 2011
နိုင်ငံပိုင် ဓါတုပစ္စည်း သိုလှောင်ရုံ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှု
ရန်ကုန်တိုင်း အရှေ့ပိုင်းခရိုင် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၌ လူ ၂၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့သော
posted by မင်းနိုင်အောင် at 21:520Comments
မလေးရှားနိုင်စမုံညှင်းအရပ်ဒေသတွင်တည်ထားကိုယ်ကွယ်သောစေတီတော်မြတ်ကြီးသည်ဥဏ်တော်အမြင့် (၄၅ )ပေ အချင်ဝက် (၃၅)ပေခန့်ရှိပြီးဂန္ဓကုဠီတိုက်တွင်သီတင်းသုံးစံပယ်နေသောကြေးသွန်းရုပ်ပွားတော်ကြီးမှာအမြင့်(၁၅)ပေခန်ရှိပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှပင့်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ဂန္ဓကုဠီတိုက်ဘယ်ဖက်တွင်ကြီးမားသော
ကျောက်တောင်အားထွင်ထုထားသောလျှောင်းတော်မူရုပ်ပွားတော်ကြီးလည်းရှိသည်.မလေးရှားနိုင်kepong မှလူငယ်လူရွယ်များစွာတို့သည်၂၅.၁၂.၂၀၁၁ နေ့တွင်လုပ်အားပေးခဲ့ကြသည်ကိုတွေမြင်ခဲ့ရသည်။
posted by မင်းနိုင်အောင် at 04:260Comments
ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီး တိုက်ခတ်လာတဲ့လေပြင်ညှင်းက ကျွန်မစိတ်တွေကို လန်းဆန်းစေပါတယ် ။ စိုစွတ်စွတ်သဲမြေပေါ်မှာ ခြေဗလာနဲ့ လမ်းလျှောက်ရခြင်းကလည်း လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ခံစားမှုကို ဖြစ်စေပါတယ် ။ တိမ်တွေကြားမှ ခပ်ကျဲကျဲ ကျနေတဲ့နေေ၇ာင်ကလည်း နွေးထွေးမှုကို ပေးပါသေးတယ် ။ ကမ်းစပ်ကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပြေးတိုက်လာတဲ့ ပင်လယ်လှိုင်လုံးလေးတွေရဲ့ အသံကလည်း သဘာဝရဲ့ဆည်းချက်တွေလိုပါပဲ ။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ရာသီဥုတုအနေထား သဟာဇာတကျစွာ မျှတပြီး အနားယူလို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးကတော့ ချောင်းသာကမ်းခြေမှာပါပဲ ။
မြို့ပြရဲ့ မွန်းကြပ်လှတဲ့ ဘ၀တွေထဲ ခဏတာထွက်ပြေးပုန်းရှောင်ရင်း ဒီလိုနေရာလေးမှာ အပန်းဖြေအနားယူရတာ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ နေ့ရက်တွေပါပဲ ။ နေစဉ်နေ့ တိုင်း ၊ မီးခိုးတွေ ၊ ဖုန်မှုတွေ ၊ ကြပ်သိပ်လှတဲ့ ဘတ်စ်ကားတွေ ၊ အရောင်စုံလူစုံကြားထဲ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတဲ့ ဘ၀မို့ တစ်ခါတစ်လေ သောကမရှိလျှောက်သွားနေရတဲ့ ယခုလိုနေရက်မျိုးကို တောင့်တမိပြန်တယ်လေ … ။ ရန်ကုန်တွင် ခြေဗလာဖြင့်လမ်းမလျှောက်ဖူးပေမယ့် ကမ်းခြေရောက်တုံး အလုပ်တွေလည်း ပြီးလို့ … သဘာဝရဲ့ အသာကို အပြည့်ဝခံစားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ရေစပ်စပ်စိုနေတဲ့ သဲမြေပြင်ပေါ်ကို ဖိနပ်မပါပဲ လမ်းလျှောက်နေမိတယ် ။ ထိုစဉ် ဘယ်က ဘယ်လို ထွက်လာမှန်းမသိတဲ့ ကလေးတစ်သိုက် ရေပုံးလေးများ ကိုယ်စီဖြင့် "အစ်မ ကဏန်းလွှတ်မလား ၊ ဂုံးလွှတ်မလား " ဟုဆိုကာ အနားသို့ ရောက်လာကြသည် ။ ဗုဒ္ဒေါတမိရအောင် … မမျှော်လင့်ပဲ ကြားရသောစကားကြောင့် ကျွန်မ နားမလည်သလိုလို မျက်လုံးများဖြင့် သူတို့ကို ပြူးကြည့်နေမိတယ် ။
သူတို့ ပြောသလိုပဲ ကဏန်းလေးတွေ အရွယ်စုံ ဆိုဒ်စုံ ပုံးလေးအတွင်းမှာ ယောက်ယက်ခတ်နေတော့တယ်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေလိုနေရာမျိုးမှာ ကျွန်မအတွက်တော့ ကဏန်းလွှတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာ အ ထူးဆန်းပေါ့ ။ ရေထဲက ကဏန်း ပြန်ဖမ်းပြီး ပြန်လွှတ် ဒါနဲ့ပဲ သံသယာလည်နေတယ်မဟုတ်လားလို့ မေးမိတော့ ။ ကဏန်းတွေက ရေငန်မှာ မနေဘူးဆိုပဲ ။ လွှတ်လိုက်တာနဲ့ ရေထဲ ဆင်းပြေးပြီး ရေငန်ကနေ ရေနက်ပိုင်းရောက်မှ ရေချိုဘက်ထွက်ပြေးတယ်တဲ့လေ … ။
မယုံလို့ တကောင်လောက်စမ်းလွှတ်လိုက်တော့ ရေမျက်နှာပြင်အောက်ကို တိုးလျှောပြီးပြေးဆင်းတာတွေ့တယ် …. ခဏအကြာမှာ လုံးဝကိုပျောက်သွားပါတော့တယ် … ။ ကမ်းခြေမှာနေတဲ့ ကဏန်းတွေက ရေငန် သဲကဏန်းလေးတွေဖြစ်ပြီး စားလို့ရတဲ့ အရွယ်မရှိတာကိုလည်း ကလေးတွေဆီက ဗဟုသုတအနေနဲ့ကြားခဲ့ရပါသေးတယ် ။ စပ်စပ်စုစုကျွန်မက ဒီကဏန်းတွေလွှတ်မယ့်လူမရှိလျှင် ဘာဖြစ်မလဲမေးကြည့်တော့ ဟင်းအိုးထဲရောက်မှာပေါ့လို့လည်း ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ ပြောကြပါသေးတယ် ။ ကလေးတွေရဲ့ ပုံပန်းသွင်းပြင်က နွမ်းလျနေပေမယ့် သူတို့ အပြုံးလေးတွေက ၀င်းလက်နေပါတယ် ။ အ၀တ်စား အဆင်ယင်အရသာ နွမ်းပါးချင်နွမ်းပါးမယ် ၊ စာရိတ္တပိုင်းမှာ မနွမ်းပါးဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ သူတို့နဲ့ စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြောစဉ်အတွင်း ကျွန်မကောင်းကောင်းခံစားမိပါတယ် ။ ကဏန်းလေးတွေတစ်နေ့ ဘယ်လောက်ဖိုးရောင်းရသလဲမေးတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ထောင်ဖိုးလောက်သာ ပျှမ်းမျှရောင်းရပါသတဲ့ ။ ခရီးသွားတဲ့ရာသီလောက်သာ ရောင်းအားကောင်းကြောင်းပြောပြပါတယ် ။ ကဏန်းတစ်ကောင်ကို တစ်ရာကျပ်နှုန်းနဲ့ရောင်းပြီး အရောင်းထိုင်းတဲ့နေ့တွေမှာ အိမ်စရိတ်ရအောင် တစ်ကောင် ငါးဆယ်ကျပ်နဲ့ရောင်းပါတယ် ။ ဒါ့ပြင် ဂုံးလေးတွေကိုလည်း တစ်လုံးတစ်ထောင်နဲ့ ဇီဝိတဒါန လုပ်နိုင်ပါသေးသတဲ့လေ … ။ ကလေးတွေဆီက ဂုံးနဲ့ ကဏန်းအားလုံးလွှတ်ပြီးတော့ ရှင်းပေးလိုက်ရတာ သုံးထောင့်ငါးရာလောက်ပဲမို့ ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လား လွှတ်လိုက်တာတွေက အများကြီးလို့ မေးတဲ့အခါ ။ သူတို့ သချာင်္တွက်တက်ပါတယ်တဲ့ ကဏန်းလွှတ်နေကတည်းက အကောင်ရေ ရေတွက်ခဲ့တာပါတဲ့လေ ။ တချို့ကလေးတွေက အကောင်သေးလေးတွေကိုပါ အစစ်အနေနဲ့ ထည့်ပေးတာကြောင့် အများကြီးဖြစ်နေတာလို့ ထင်နေတာပါလို့ ပြန်ချေပပြောဆိုပါသေးတယ် ။
အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ပဲ သွက်လက်ချက်ချာလွန်းတဲ့ ကလေးတွေအကြောင်း စပ်စုချင်စိတ်ဖြစ်မိပြန်တော့ သူတို့လေးတွေရဲ့ ဘ၀တစိတ်တပိုင်းကိုလည်း သိခွင့်ရခဲ့ပါသေးတယ် ။ ကလေးတွေထဲက အများစုက ကျောင်းမနေတော့ပါဘူး အလွန်ဆုံးလေးတန်း ၊ ငါးတန်းလောက်မှာပဲ ကျောင်းထွက်ကာ ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ ကြုံရာကျပန်းလုပ်ရောင်းပြီးရှာကျွေးနေကြတာပါ ။ ကဏန်းရောင်းတဲ့ ကလေးတွေအသက်ကိုမေးကြည့်တော့ အငယ်ဆုံး ငါးနှစ်မပြည့်တပြည့်လေးတောင် ပါပါသေးတယ် ။ သားလေးနာမည်ဘယ်သူလဲလို့မေးတော့ …. စကားတောင် လုံးစေ့ပတ်စေ့မပြောတတ်သေးတာတွေ့ရတယ် ။
ကျွန်မမြင်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် ။ ဒီအရွယ်လေးတွေဟာ စာသင်ခန်းထဲမှာ ရှိနေရမယ့်အရွယ်လေးတွေပါ ။ မိဘ အစဉ်ဆက် လျှောက်လာတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း သေစာရှင်စာလောက်သာ သင်ခွင့်ရပြီး ဈေးသည်ဘ၀ ၊ ကျပန်းလုပ်စားရတဲ့ ဘ၀ကိုရောက်ကုန်ကြပါတယ် ။ မိဘတွေရဲ့ အထောက်ပံ့ သွန်သင်မှုကို မရခဲ့ပေမယ့် အလုပ်ကပေးတဲ့အတွေ့ကြုံကြောင့် တတ်မြောက်ခဲ့တာကတော့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပါပဲ ။ ခပ်နွမ်းနွမ်း အကျီ င်္လေးတွေနဲ့ ကလေးတွေနှုတ်ဖျားက ထွက်တဲ့စကား ဘယ်လိုမှ ဒီလောက်ပြောတတ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မတွေးမထားခဲ့မိပါဘူး ။ အသက်ရွယ်မျိုးစုံနဲ့ သင့်တင့်လျှောက်ပတ်အောင် စကားပြောဆိုနိုင်တာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ် ။ မရှိခိုးနိုးဆိုတဲ့စကားပုံမျိုးရှိခဲ့ပေမယ့် … ဒီကလေးတွေကတော့ ကိုယ်ကျင့်တရားမပျက်ပြားပဲ အလုပ်လုပ်မှ ပိုက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့စိတ် ကိုယ်စီရှိနေခဲ့တာကိုလည်း လေးစားစရာတွေ့မြင့်ခဲ့ရပါတယ် … ။ ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ရေး ခဏ၀င်တွေးကြည့်ပြန်တော့ စိတ်မသက်မသာဖြစ်မိခဲ့တယ် ။ တစ်သက်လုံး သောင်ပြင်မှာပဲ ဈေးသည်ဘ၀နဲ့ နေတော့မတဲ့လား … ။ ကျောင်းမတတ်ချင်ဘူးလားမေးပြန်တော့ … ကျောင်းတက်လျှင် ပိုက်ဆံကုန်မှာပေါ့တဲ့ ။ အမေနဲ့ အဖေမှာ ပိုက်ဆံမရှိဘူးတဲ့လေ ။
ကလေးတွေကတော့ သူတို့ ဘ၀ကို သူတို့ နေပျော်နေကြပေမယ့် မြင်ရတဲ့ ကျွန်မကတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ကာ မျက်ရဲဝဲမိတယ် ။ သူတို့နဲ့ ယှဉ်တော့မှ ငါတောင်ဒီလောက် အသုံးကျခဲ့ဖူးလားဆိုတာမျိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးမိတယ် ။ မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီလိုဘ၀ကနေအိမ်ထောင်ကျပြီး နှုတ်ခမ်းပဲ့ခြင်း မီးမှုတ်ရာက ကလေးတွေမြေစာပင်ဖြစ်ကြရတယ် ။ တာဝန်ယူမှုဆိုတာမျိုး ၊ မိဘ၀တ္တရားဆိုတာမျိုး နားလည်ခဲ့ဟန်မတူဘူး ။ မွေးပြီး တာဝန်ကျေတယ်ထင်ကာ ကြုံရာဘ၀ရှာစားစေခဲ့တာ သူတို့လေးတွေအစား အငှားဒေါသဖြစ်မိခဲ့တယ် ။ ကလေးတွေကတော့ မိဘကို အပြစ်တင်တဲ့ စိတ်လုံးဝမရှိကြပုံပါပဲ … ။ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ်လို့ ခံယူထားကြပုံပါ ။
အခမဲ့ပညာရေးတွေ လုပ်ပေးနေတဲ့ကြားက ကျောင်းမနေနိုင်သေးတဲ့ ကလေးတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ တကယ်လက်တွေ့ မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ် ။ အခမဲ့စာသင်ကြားနိုင်ပါလျှက် ကျောင်းတက်ဖို့ထက် စားဝတ်နေရေးစရိတ်ရှာရတဲ့ ကလေးတွေ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် သူတို့ဘ၀ကြမ်းတမ်းကြရှာတယ် ။ ငါးနှစ်ဆိုတဲ့အရွယ် မိဘဆွေမျိုးတွေကြားထဲ တီတီတာတာချွဲပြီး လိုချင်သမျှ လက်ညှိုးထိုးဝယ်ခိုင်းတတ်တဲ့ မြို့ကကလေးတွေကတော့ ဒီလိုအတွေ့ကြုံမျိုး ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေ ။ မျက်လုံးနှစ်လုံးပွင့်ကတည်းက ၀မ်းစာအတွက်ရှာဖွေရတဲ့ သူတို့ဘ၀ ကိုယ်တတ်နိုင်တာနဲ့ ဘာများလုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်လို့ တွေးမိပြန်တော့ ဘာမှ လုပ်ပေးနိုင်တာမရှိဘူးလေ ။ ကျောင်းတက်ချင်လားမေးပြီး ကျောင်းထားပေးဦးတော့ မနေချင်ပါဘူး တဲ့ …. ကျောင်းတက်နေစဉ်ကာလ ပိုက်ဆံရှာမရတာကြောင့်ပါတဲ့လေ ။ ဒါမှမဟုတ်ဘာအလုပ်လုပ်ချင်သလဲဆိုတော့လည်း ရေရေရာရာမရှိပါဘူး ။ပိုက်ဆံရမယ့်အလုပ် ရိုးရိုးသားသားဆို ဘာမဆိုလုပ်ပါမယ်တဲ့ … ။သူများပစ္စည်းတော့ ခိုးဝှက်လိမ်မစားပါဘူးတဲ့လေ ။ ရေရှည်အလုပ်မြဲဖို့အတွက်ပါတဲ့ ..။ မြို့ကကလေးတွေကတော့ သားသားကြီးလျှင် ဘာလုပ်မလဲမေးတိုင်း စစ်ဗိုလ်ကြီးလုပ်မယ် ၊ ဆရာဝန်ကြီးလုပ်မယ် ၊ အင်ဂျင်နီယာကြီးလုပ်မယ် စသဖြင့် (တကယ်ဖြစ်ချင်ချင် မဖြစ်ချင်ချင်) ပြောတတ်ကြတယ် ။ အဲ့ဒီကလေးတွေက မိမိဘ၀ကို မိမိကိုယ်တိုင်တောင် အချိုးချဖို့ တွေးမကြည့်တတ်သူလေးတွေပါ … ။ မိဘရင်ခွင်မှာ မိမိကိုယ်ကို ကလေးလို့ ခံယူရင်း ပျော်နေကြတဲ့ ကလေးတွေပေါ့ ။
ကလေးတွေရဲ့ လူနေမှုစရိုက်နဲ့ ပေါက်ဖွားရာ ဒေသကွာခြားတာကြောင့် အသက်ချင်းတူတာတောင် တွေးတောပုံလေးတွေခြားနားနေတယ် … ။ ကျောင်းလည်း မတတ်ချင် ၊ စာသင်တာကို ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးလို သဘောထားတဲ့ကလေးတွေကြား ကူညီနိုင်တာ ဘာမှမရှိတာမို့ … ပါလာတဲ့ မုန့်ကျွေး ၊ မုန့်ဖိုးပေးပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတော့တယ် … ။ ပျော်ရွှင်ခုန်ပေါက်ပြီး ပြန်ထွက်သွားတဲ့ သူတို့ကျောပြင်တွေကိုကြည့်ရင်း သက်ပြင်းသာချမိပါတော့တယ် .. ။ ။
( http://mandalaygazette.com/87653/society-lifestyle မှာပုံတွေ ပိုများများတင်ပေးထားပါတယ် ။ )
posted by မင်းနိုင်အောင် at 00:160Comments
Convention on the Rights of Child CRC
ကလေးသူငယ်များအခွင့်အရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာခူပ် (Convention on theRights of the Child
CRC ) နှင့်ပက်သက်သောအယူအဆသည် ၁၉၇၉ ခုနှစ် ကလေးများနှစ်ကိုကျင်းပရန်စီစဉ်ရာမှစတင်ပေါ်
ပေါက်လာခဲ့သည်.စာခူပ်မူကြမ်းအတွက်အဓိကတာဝန်ကို ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင်ပိုလန်နိုင်ငံမှဦးဆောငိရေးဆွဲခဲ့
သည်။မူကြမ်းရေးဆွဲမူသည် ၁၉၇၈ မှ ၁၉၈၉ အထိကြာမြင့်ခဲ့သည်မူလရေးဆွဲခဲ့သောမူကြမ်းကိုအခြေခံပြီး
(WHO) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ ( ILO )စသည့်အဖွဲ့များ၏တင်ပြချက်များကိုလည်းလက်ခံသုံး
သပ်ခဲ့ကြပြီး ၁၉၈၉ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသောကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှ
သောနိုင်ငံ ၂၀ ပြည်သွားသဖြင့်စာခူပ်အသက်ဝင်လာခဲ့သည်..မြန်မာနိုင်ငံသည် ထို့ကလေးသူငယ်များဆိုင်
ရာသဘောတူစာခူပ်ကို ၁၉၉၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုလပ်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
၁--အသက်ရှင်ရပ်တည်ခွင့်အခွင့်အရေးများ (Survival Rights )
၂--ဖွံ့ဖြိုးမူဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများ ( Development Rights )
၃--ကာကွယ်မူဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများ ( Protection Rights )
၄--ပါဝင်ဆောင်ရွက်မူဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများ ( Participation Rights ) တို့ဖြစ်သည်။
အပိုဒ် ( ၁ )--အသက်သတ်မှတ်ချက် ၁၈ နှစ်။
အပိုဒ် ( ၂ )--မည်သည်ကလေးကိုမှခွဲခြားခြင်းမရှိရ။
အပိုဒ် ( ၃ )--နိုင်ငံတော်အစိုးရက ကလေးများနှင့်သက်ဆိုင်သောကိစ္စများတွင်ကလေးများအတွက်
အပိုဒ် ( ၄ )--ကလေးများအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ရန်အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဘက်ပေါင်းစုံမှ
အပိုဒ် ( ၅ )--ကလေးအခွင့်အရေးနှင့်လျော်ညီသောမိဘများ၏တာဝန်ယူထိမ်းသိမ်းလမ်းညွန်ခွင့်ကို့
အပိုဒ် ( ၆ )--ကလေးများ၏အသက်ရှင်ရပ်တည်ခွင့်.ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခွင့်။
အပိုဒ် ( ၇ )--အမည်မှည်ပိုင်ခွင့်နှင့်မွေးစာရင်းမှတ်ပုံတင်ခွင့်။
အပိုဒ် (၈ )--ကလေးများ၏မိဘမိူးရိုး နောက်ကြောင်းအပါအဝင်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များသိရှိခွင့်ကို့
အပိုဒ် ( ၉ )--အတက်နိုင်ဆုံးမိဘများနှင့်မခွဲရန် သို့သော် ကလေးများအတွက်အကောင်ဆုံးအကိူး
အပိုဒ် (၁၀ )--မိသားစုချင်းပြန်လည်တွေနိုင်ရန်အတွက်နိုင်ငံအတွင်းလာရောက်ခွင့်.ထွက်ခွါခွင့်ပြုရန်။
အပိုဒ် ( ၁၁ )--ကလေးများအားနိနုင်ငံခြားသို့ပြန်လမ်းမရှိခေါ်ဆောင်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးရန်။
အပိုဒ် (၁၂ )--ကလေးငယ်များ၏အတွေးအမြင်အယူအဆများကိုတင်ပြခွင့်-ကလေးများနှင့်ပက်သက်သော
အပိုဒ် ( ၁၃ )--ကလေးငယ်များ၏လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်-သတင်းများရယူခွင့်။
အပိုဒ် (၁၄ )--ကလေးငယ်များ၏လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်-ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်။
အပိုဒ် ( ၁၅ )--ကလေးများ၏လွတ်လပ်စွာအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ခွင့်-စုဝေးခွင့်။
အပိုဒ် ( ၁၆ )--ပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်ခွင့်ကိုမတရားစွက်ဖက်မူမှကင်းဝေးရေး။
အပိုဒ် (၁၇ )--ကလေးများ၏လူမူရေး-ယဉ်ကျေးမူနှင့်စာရိတ္တဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လူထုသင်တန်း
အပိုဒ် (၁၈ )--ကလေးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူအတွက် အဓိကတာဝန်ရှိသောမိဘအုပ်ထိမ်းသူများကို့
အပိုဒ် (၁၉ )--ကလေးများအားရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းနှိပ်စက်မူမှကာကွယ်ရန်နိုင်ငံတော်မှလိုအပ်သောအရေးယူမူ
အပိုဒ် ( ၂၀ )--မိသားစုနှင့်ဝေးကွာနေသောကလေးများအားနိုင်ငံတော်မှကူညီကာကွယ်မူများပြုလုပ်ပေးရန်
အပိုဒ် ( ၂၁ )---ကလေးများ၏အကောင်းဆုံးအကိူးဖြစ်ပါကမွေးစားခြင်းကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရမှခွင့်ပြုရန်
အပိုဒ် ( ၂၂ )--ဒုက္ခသည်ကလေးများအားလိုအပ်သောကူညီကာကွယ်မူများကိုအစိုးရမှလုပ်ဆောင်ပေးရန်။
အပိုဒ် ( ၂၃ )--ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကူညီမူအထူးလိုအပ်သောကလေးများကိုအခြားကလေးများတန်းတူ
အပိုဒ် ( ၂၄ )--ကလေးများအတွက်အမြင့်မားဆုံးကျန်းမာရေးရှောက်မူရရှိစေရေးအတွက်နိုင်ငံတော်
အပိုဒ် ( ၂၅ )--စောင့်ရှောက်ရေးဌာနများလက်အောက်ရှိကလေးများကိုအချိ်န်မှန်ဆန်းစစ်ခွင့်ရှိရန်။
အပိုဒ် ( ၂၆ )--ကလေးများလူမူဖူလုံရေးအခွင့်အရေးရရှိရန်။
အပိုဒ် ( ၂၇ )--လုံလောက်သောလူနေမူဘဝအဆင့်အတန်းရရှိရေး။
အပိုဒ် ( ၂၈ )--မူလတန်းပညာမသင်မနေအပါအဝင်တန်းတူပညာသင်ခွင့်။
အပိုဒ် (၂၉ )--ကလေးများ၏ကိုယ်ရေကိုယ်သွေးနှင့်ဗလငါးတန်တိုးတက်စေသောပညာရေးဖြစ်ရေး။
အပိုဒ် (၃၀ )--တိုင်းရင်းသားနှင့်မူရင်းဌာနေလူမိူးစုဝင်ကလေးများ၏ယဉ်ကျေးမူဘာသာစကားကို
အပိုဒ် ( ၃၁ )--ကလေးငယ်များအပန်းဖြေနားနေခွင့်။
အပိုဒ် (၃၂ )--မတရားစီးပွားရေးအမြတ်ထုတ်မူ..စေခိုင်းမူတို့မှကာကွယ်ပေးရေး။
အပိုဒ် (၃၃ )--ကလေးများမူယစ်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်စေမူမှကာကွယ်ပေးရေး။
အပိုဒ် (၃၄ )--ကလေးငယ်များအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားအမြတ်ထုတ်မူမှကာကွယ်ပေးရေး။
အပိုဒ် ( ၃၅ )--ကလေးငယ်များအားနည်းမူ်းစုံဖြင့်ကူးသန်းရောင်ဝယ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးရေး။
အပိုဒ် ( ၃၆ )--ဥပဒေများက ကလေးငယ်များ၏ဘဝကိုထိခိုက်စေမည်အဂတိအစွဲများမှကာကွယ်ပေးရေး။
အပိုဒ် ( ၃၇ )--ကလေးငယ်များအား မတရားအပြစ်ပေးနှိပ်စက်ခြင်း.သေဒဏ်ပေးခြင်းတို့မှကာကွယ်ပေးရေး
အပိုဒ် (၃၈ )--အသက် ၁၅ နှစ်အောက်ကလေးများအားစစ်မူထမ်းစေခြင်းမှကာကွယ်ပေးရေး။
အပိုဒ် (၃၉ )--စော်ကားပစ်ပယ်ခံကလေးများအားပြန်လည်နာလန်ထစေရန်လူမူအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း
အပိုဒ် ( ၄၀ )--ရာဇဝက်မူနှင်ပတ်သက်နေသောကလေးများကိုကလေးဥပဒေဖြင့်သာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်။
posted by မင်းနိုင်အောင် at 23:270Comments
လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင်စတင်ပြီး အမေရိကန်သမ္မတကတော်ဖြစ်သူ အယ်လီနာရိုးစဘဲ(Eleanor Roosevelf )၏ဦးဆောင်မူဖြင့်ရေးဆွဲခဲ့သော ထို့စာတမ်းအပေါ်
ကမ္ဘာနိုင်ငံများကအထူးစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်..အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ..အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့များနှင့် အကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မူများလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၄၇၈ ခုနှစ် ဇွန်လတွင်အပြီးသတ်နိုင်ခဲ့သည်..
ထို့မူကြမ်းကိုအကြိမ်များစွာလေ့လာမူများလုပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၄၈ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင်ပြင်သစ်နိုင်ငံ.ပဲရစ်မြို့
တွင်ကျင်းပသော ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှထို့ကြေညာစာတမ်းကိုအတည်ပြုပြဌာန်းနိုင်ခဲ့ပါသည် -
နိုင်ငံပေါင်း ၄၈ နိုင်ငံမှထောက်ခံပြီး ..ဘဲလတ်ရပ်-ချက်ကိုစလိုဗေးကီးယား-ပိုလန်-ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား-
တောင်အာဖရိက-ယူကရိမ်း-ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု-ယူဂိုစလားဗီးယား-နိုင်ငံ ၈နိုင်ငံမှ မဲမပေးပဲကြားနေခဲ့
ထို့ကြေညာစာတမ်းတွင် လူသားတို့၏နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး(Civil Rights)-နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေး(Political Rights )- လူမူအခွင့်အရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမူအခွင့်အရေး (Economic.Social.and Cultural Rights တို့ပါဝင်သည်ကိုတွေရပြီးအပိုဒ်ပေါင်း ၃၀ ပါဝင်တွင် အပိုဒ် ၁ နှင့် အပိုဒ်၂ သည်လူ့အခွင့်အရေးအ
ယူအဆတိုဖြစ်ပြီး အပိုဒ် ၃ မှ၁၆ နှင့် အပိုဒ် ၁၈ မှ ၂၁တို့တွင် နိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးများဖေါ်ပြီး
အပိုဒ် ၁၇ နှင့်အပိုဒ် ၂၂ တိုါမှ၂၇ အထိ စီးပွားရေး-လူမူရေး-ယဉ်ကျေးမူဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကိုဖေါ်ပြ
ထားပြီး အပိုဒ် ၂၈ မှ အပိုဒ် ၃၀အထိသည်လူ့အခွင့်အရေးများကိုလေးစားရန်-အခြားသူများ၏အခွင့်အရေး
အပိုဒ် ( ၁)--လူတိုင်းသည်မွေးလာထည်းကတန်းတူညီမူရှိသည်။
အပိုဒ် (၂ )--မည်သူ့ကိုမှခွဲခြားဖိနှိပ်ခြင်းမရှိရ။
အပိုဒ် (၄ )--မည်သူ့ကိုမှ ကျွန်အဖြစ်စေခိုင်းခြင်း.ရောင်ဝယ်ခြင်းမပြုရ။
အပိုဒ် (၅ )--မည်သူ့ကိုမှ မတရားနှိပ်စက်ခြင်း.လူမဆန်စွာ. ရက်စက်စွာဆက်ဆံခြင်း
အပိုဒ် ( ၆ )--တရားဥပဒေရှေ့မှောက်တွင် လူတိုင်းအားလူသားအဖြစ်အသိအမှတ်ခံပိုင်ခွင့်။
အပိုဒ် (၇ )--တရားဥပဒေရှေ့တွင်တန်းတူညီခွင့်။
အပိုဒ် (၈ )--မိမိအခွငါ့အရေးခိူးဖေါက်ခံရပါက ဥပဒေအကူအညီရယူခွင့်။
အပိုဒ် (၉ )--မတရားဖမ်းဆီးခြင်း.တိုင်းပြည်မှနှင်ထုတ်ခြင်းအားကာကွယ်ရရှိပိုင်ခွင့်။
အပိုဒ် (၁၂ )--ပုဂ္ဂလိက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများအားဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးခြင်း။
အပိုဒ် (၁၃ )--လွတ်လပ်စွာလူပ်ရှားသွားလာခွင့်။
အပိုဒ် (၁၄ )--မတရားအပြစ်ပေးခြင်းခံရမည်ဆိုပါကအခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်ခိုလူံခွင့်
အပိုဒ် (၁၆ )--အရွယ်ရောက်သူတိုင်းမိမိဆန္ဒဖြင့်လက်ထပ်မြားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အပိုဒ် (၁၇ )--ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုငိခွင့်။
အပိုဒ် (၁၈)--လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိသည်။
အပိုဒ် (၂၀ )--ငြိမ်းချမ်းစွာဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများသို့လွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်စုဝေးခွင့်။
အပိုဒ် (၂၂ )--လူမူဖူလုံရေးခံစားခွင့်။
အပိုဒ် (၂၃ )--အလုပ်လုပ်ခွင့်..အလုပ်သမားသမဂ္ဂများဝင်ရောက်ခွင့်။
အပိုဒ် (၂၄ )--အပန်းဖြေအနားယူခွင့်။
အပိုဒ် (၂၅ )--လုံလောက်သောလူမူအဆင့်အတန်းခံစားခွင့်နှင့်ဆေးကုသခံခွင့်။
အပိုဒ် (၂၆ )--ပညာသင်ကြားခွင်။
အပိုဒ် (၂၇ )--ယဉ်ကျေးမူဘဝတွင်ပါဝင်ပိုင်ခွင့်နှင့်မိမိတီတွင်မူအကိူးကိုမိမိခံစားခွင့်။
အပိုဒ် (၂၈ )--ထို့အခွင့်အရေးများကိုလေးစားရန်တာဝန်။
အပိုဒ် (၂၉ )--အခြားသူ၏အခွင့်အရေးများကိုလေးစားရန်တာဝန်။
အပိုဒ် (၃၀ )---မည်သူမှထို့အခွင့်အရေးများကိုမခိူးဖောက်ရန်တာဝန်။
posted by မင်းနိုင်အောင် at 17:010Comments
ပါတီရဲ့ အမှတ်အသားသစ်ကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
လာမယ့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာသုံးမယ့် ပါတီရဲ့ အမှတ်အသားသစ်ကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရပိုင် သတင်းစာထဲမှာ တနင်္လာနေ့က ဖော်ပြလိုက်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ သင်္ကေတ ကြေညာချက်ထဲမှာ ပါတီအလံနဲ့ သဏ္ဍန်တူတဲ့ အနီရောင် အောက်ခံပေါ်မှာ ရွှေဝါရောင် ခွပ်ဒေါင်းက ကြယ်ဖြူကို ဦးတိုက်ထားတဲ့ပုံကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ တခြား ပါတီတချို့က အရင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ခမောက်တံဆိပ် အမှတ်အသားကို သုံးစွဲလာခဲ့တာမို့ ခြားနားမှုရှိအောင် အခုလို တံဆိပ်အသစ် ထုတ်ပြန် သုံးစွဲရတာဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဆိုပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ကိုဝင်းမင်းက မေးမြန်းတင်ပြထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD က မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ကျောင်းသားတွေကို ကိုယ်စားပြုခဲ့တဲ့ ခွပ်ဒေါင်းပုံရိပ်ကို ပါတီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတံဆိပ်အဖြစ် သုံးဖို့ ရွေးချယ် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အခုလို ရွေးချယ်လိုက်တာကို ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က လုပ်ခဲ့တဲ့ NLD ပါတီရဲ့ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် အစည်းအဝေးကနေ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ NLD ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆိုပါတယ်။ NLD ရဲ့ ဒီ ရွေးကောက်ပွဲ တံဆိပ်မှာ NLD အလံမှာပါတဲ့ပုံနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်တယ်၊ ကွဲတာက ဒီတံဆိပ်အောက်ပိုင်းမှာ အပြာရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဆိုတာ ထပ်ပါတာပဲဖြစ်တယ်လို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
အရင်က NLD အနေနဲ့ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့တုန်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဦးရေအများဆုံးဖြတ်တဲ့ လယ်သမားတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ခမောက်တံဆိပ်ကို ရွေးကောက်ပွဲမှာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့် အခုလို တံဆိပ်သစ်ပြောင်းပြီး ကြေညာခဲ့ရတယ် ဆိုတာကို ဦးဉာဏ်ဝင်းက အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“အခု ဆင်တူယိုးမှား ခမောက်ရှိတယ်။ ခမောက် သုံးလုံးရှိတယ်။ တခြားပါတီတွေက ရွေးကောက်ပွဲ သင်္ကေတတွေပေါ့။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့နဲ့ ခမောက်သင်္ကေတနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ကြေညာဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ယူဆတာ။ အဲဒါကြောင့် NLD ဟာ ရွေးကောက်ပွဲ အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် ခမောက်ကို အခု မသုံးတော့ဘူး။ အခု NLD ရဲ့ ပါတီအမှတ်တံဆိပ်ဟာ ခွပ်ဒေါင်း၊ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဆိုတဲ့ စာတမ်းပါတဲ့ဟာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြည်သူတွေရှင်းလင်းသွားအောင်လို့ သတင်းစာထဲမှာ ထည့်တာပါ။”
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ NLD ကို အာဏာမလွှဲပေးဘဲ ဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ဦးဆောင်တဲ့ စစ်အစိုးရဟောင်း အနေနဲ့ ၂၀၁၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲတွေကို ထပ်မံကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနေချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အကျယ်ချုပ် ကျနေခဲ့ပြီး တင်းကျပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေနဲ့ စစ်အစိုးရက တဘက်သတ် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ဒီမိုကရေစီမကျဘူးလို့ ယူဆခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကြောင့် NLD အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်မပြိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုလို NLD က ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်မပြိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ် သဘောထားကွဲပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေ ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ပါတီက ဒီ ခမောက်တံဆိပ်ကို NLD ကန့်ကွက်တဲ့ကြားထဲကပဲ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ခွင့်ပြုလို့ အသုံးပြုလာခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း ရွေးကောက်ပွဲအပြီး NDF ပါတီကနေ ထပ်ခွဲလာခဲ့တဲ့ ဦးသိန်းညွှန့် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ ပါတီသစ်ကလည်း ခမောက်သုံးခုပါတဲ့ တံဆိပ်ကို ထပ်ပြီး အသုံးပြုလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီပါတီတွေနဲ့မဆိုင်ဘဲ NLD က သီးသန့်ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ပြနိုင်ဖို့ အခုလို တံဆိပ်သစ်ကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ် ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆိုပါတယ်။ ဒီအလံမှာရော၊ တံဆိပ်မှာပါ ပါတဲ့ အရောင်နဲ့သင်္ကေတတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဦးဉာဏ်ဝင်းက အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“အခုကတော့ အနီရောင်က ရဲရင့်ခြင်းပေါ့ဗျာ။ ခွပ်ဒေါင်းဆိုတာကတော့ တကယ့်ကို တိုက်ပွဲဝင် အမှတ်အသားပေါ့။”
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရုံး ဒါရိုက်တာ ဦးဝင်းထိန်ကလည်း ဒီတံဆိပ် အမှတ်အသားတွေဟာ အပြောင်းအလဲအတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကိုယ်စားပြုတာဖြစ်တယ်၊ ခွပ်ဒေါင်းကလည်း ကျောင်းသားတွေရဲ့ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီရေး စွန့်လွှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုတာဖြစ်တယ်လို့ အေအက်ဖ်ပီ သတင်းဌာနကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ NLD အနေနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွေကို သပိတ်မှောက်ခဲ့ပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လာအပြီးနဲ့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရတက်လာအပြီးမှာ ဒီခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့ တွေ့ဆုံကြတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေ ကနေတဆင့် ပါလီမန်သစ်ဘက်ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေကို လျှော့ပေါ့ပေးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ စပွင့်လင်းလာတဲ့ အခြေအနေကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး NLD အနေနဲ့ ရှေ့နှစ်မှာကျင်းပမယ့် အမတ်နေရာ ၅၀ နီးပါး လျစ်လပ်ထားတဲ့နေရာအတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွေကို ဘယ်နေ့ ကျင်းပရမယ်ဆိုတာ မသိသေးပေမဲ့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ သူမအနေနဲ့လည်း ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ၀င်ပြိုင်ဖို့ရှိတယ်၊ အခုလို ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနဲ့ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးတွေကို ပါတီရဲ့ အဓိကဦးတည်ချက်တွေအဖြစ် ဦးစားပေးလုပ်သွားဖို့ ရှိတယ်လို့ ပြောလာခဲ့ပါတယ်။
posted by မင်းနိုင်အောင် at 04:380Comments
အစိုးရမှ မြန်မာ့ပညာရေးတိုးတက်ရန် ပုဂ္ဂိလကကျောင်း ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းကာ အခြေခံ
ကျောင်းများ တည်ထောင်ခွင့်ပြုလိုက်သည်ကို ကြိုဆိုသော်လည်း ခေတ်နှင့် မလျော်ညီတော့သည့် သင်ရိုးများကို
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သင့်ပြီဟု ပညာရေးဝန်ထမ်းဟောင်းများနှင့် ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူများက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေခံကျောင်းများတွင် ကျင့်သုံးနေသည့် လက်ရှိသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများသည် လွန်ခဲ့သည့် အနှစ် ၃ဝ က သင်ရိုးများဖြစ်နေကာ ခေတ်မီအကြောင်းအရာများ မပါရှိရှိခြင်း၊ ခေတ်မီ ဝေါဟာရများနှင့် သရုပ်ဖေါ်ပုံများ မပါရှိခြင်းတို့ကြောင့် မြန်မာ့ပညာရေးသည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပင် နောက်ကျနေခြင်းကြောင့် သင်ရိုးများကို ပြင်ဆင်သင့်သည်ဟု ယူဆကြောင်း အထက်မြန်မာပြည်အခြေခံပညာ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူ ဆရာဦးနိုင်ငွေသိန်းကသတင်းထောက်များကိုပြောသည်။
" အခြေခံပညာမှာ တကယ့်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အများကြီးရှိတယ် အဲဒါတွေခေါ်ပြီးတော့ ပြင်ဖို့လိုတယ်။ " ဟု ဦးနိုင်ငွေသိန်းက ပြောသည်။
ယခုလ နှစ်ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည့် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း မှတ်ပုံတင် ဥပဒေတွင် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများသည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော သင်ရိုးမာတိကာများအတိုင်း သင်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုဘာသာရပ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆက်စာ သင်ခန်းစာများကိုသာ သင်ကြားခွင့်ရှိသည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ပြင်ဦးလွင် စစ်တက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာစာ ကထိက တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးသူ စာရေးဆရာကြီး ဦးအောင်သင်း ကလည်း ယခု လက်ရှိ အခြေခံပညာသင်ရိုးများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်းပြောဆိုပြီး ပညာရေးကို လွတ်လပ်မှု ပေးသင့်ကြောင်း မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
" ပညာရေး တိုးတက်ခွင့်မရရင် တိုင်းပြည်ဘယ်တော့မှ တိုးတက်ခွင့်မရဘူး၊ ပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရက ဘာမှ စွက်ဖက်ခွင့် မရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဟာ တိုးတက်တာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ပညာဆိုတာဟာ ကြိုက်သလောက် လွန့်လူးပါစေ၊ ကြိုက်သလောက် ကျက်စားပါစေ၊ ကြိုက်သလောက်
မြှင့်တင်ပါစေ အဲဒီဟာကို လုံးဝ လွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတယ်၊ အဲဒါကို အစိုးရက အကူအညီပေးရတယ်၊ အဲဒါဟာ တိုင်းပြည် တိုးတက်မှုရဲ့ အကြောင်းရင်းကြီးပဲ။" ဟုပြောသည်။
လက်ရှိ အခြေခံပညာရေး၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများသည် ကလေးများ၏ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတို့အတွက် အားနည်းနေသေးသည်ဟု မန္တလေးမြို့ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်ရှိ ဖေါင်တော်ဦး ပရဟိတ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ်ဆရာတော်ကြီး ဦးနာယက က မဇ္ဈိမကို မိန့်ကြားသည်။
ဖေါင်တော်ဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ပေးသည့် သင်ရိုးများအတိုင်း သင်ကြား
နေသော်လည်း ကလေးများ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနှင့် ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတို့ကို မြှင့်တင်ပေးသည့် သင်ကြားနည်းစနစ်ကို သုံးသည်ဟု ဆရာတော် ဦးနာယက က ဆက်လက်မိန့်ကြားသည်။
"သင်ရိုးကတော့ ပညာရှင်တွေ ပြင်ဖို့ စဉ်းစားပေါ့၊ ဦးဇင်းအနေနဲ့ကတော့ သင်ကြားနည်းတွေပေါ့။ (ကလေးဗဟိုပြု သင်ကြားနည်းစနစ်) တို့ ( ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ရန် စာဖတ်ခြင်းနှင့် စာရေးခြင်း)တို့ အဲဒီလိုဘက်ကို ပို့နိုင်တာ နည်းနေတယ်လို့ စဉ်းစားမိတယ်၊ အဲဒီ စနစ်ကို သွားနိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သင်ရိုးပြောင်း
နေရင်လည်း ကြာနေမှာစိုးတော့ ကလေးတွေအတွက် အဲဒီ သင်ရိုးတွေကိုပဲ Thinking Process တွေရအောင် သင်ပေးနေဟုသိရသည်
ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည့် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဥပဒေအရ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ ပေါ်ထွန်းလာနိုင်သော်လည်း ငွေကြေး တတ်နိုင်သူများသာ တက်နိုင်သည့် ကျောင်းများပေါ်ထွက်လာမည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်းလည်း မူလတန်းမှ တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း အထိ ကျောင်းသား ၆,ဝဝဝ ကျော်အတွက် အခမဲ့ သင်ကြားပေးနေသည့် ကျောင်းအုပ်ဆရာတော် ဦးနာယက ဆက်လက် မိန့်ကြားသည်။
သို့သော် ပညာသင်ကြားမှုအတွက် ငွေးကြေးမတတ်နိုင်သူများအတွက် ဘုန်းတော်ကြီးများ စီမံခန့်ခွဲကာ ဆရာများ ငှားရမ်းသင်ကြားပေးနိုင်မည့် ဘုန်းတော်ကြီး အခမဲ့ ပညာသင်ကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ရန် စွမ်းဆောင်သင့်
ကြောင်း စာရေးဆရာကြီး ဦးအောင်သင်းက တိုက်တွန်းသည်။
"ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ဖွင့်ပေးရမယ်၊ ဘုန်းကြီးတွေ ဦးစီးပြီးတော့ ဖွင့်ပေးရမယ်၊ ဘုန်းကြီးတွေက ဘုရားတည်တာ ပြိုင်နေကြတယ်၊ ဘုရားကို ရွှေချလို့ တိုင်းပြည်အနာဂတ် မတောက်ပဘူး၊ လူငယ်တွေကို ရွှေချမှ အနာဂတ်
တောက်ပမယ်။ ဘုန်းကြီးတွေ အဲဒါ သတိကြီးဖို့ လိုတယ်။ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေက ခေတ်သစ် ပညာရေးကို မျက်စိပွင့်ဖို့လိုတယ်။ ကိုရင်တွေလည်း သင်ပေါ့၊ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းဖွင့်ပစ်ပေါ့၊ ကိုရင်တွေလည်း သင်္ကန်းဝတ်တွေနဲ့ ကျောင်းတက်ပေါ့။ ဘုန်းကြီးတွေ လူထွက်သွားတော့လည်း လူ့လောကမှာ ပညာတတ်ရင် အမြတ်ဖြစ်တာပဲ။" ဟုသတင်းထောက်များကိုပြောသည်။
ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည့် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဥပဒေအရ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း တည်တောင်လိုသူများအနေဖြင့် အခြေခံ ပညာ မူလတန်းမှ အထက်တန်းအထိ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဖွင့်ခွင့်ရှိသည်။ အဆိုပါကျောင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်း၊
ပြည်နယ်များရှိ အခြေခံ ပညာဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ပညာရေးမှူးတို့မှ ကြပ်မတ် ကွပ်ကွဲမည် ဖြစ်သည် ဟု ဥပဒေက ပြဋ္ဌာန်းသည်။
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများသည် ထပ်ဆောင်းဘာသာရပ်နှင့် ထပ်ဆောင်း ဘာသာစကားများကို သက်ဆိုင်ရာ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သင်ကြားနိုင်မည်ဟုလည်း ဥပဒေတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာအဖြစ် လုပ်ကိုင်လိုသူများသည် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပတက္ကသိုလ် တခုခုမှ ပါရဂူဘွဲ့ သို့မဟုတ် ပညာရေးဘွဲ့ရရှိသူ၊ ဆရာ အတတ်သင် ပညာဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာ လက်မှတ်ရရှိပြီးသူ အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် အနည်းဆုံး လုပ်သက် ငါးနှစ်ရှိသူတို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်ဟု ဥပဒေတွင် ပါရှိသည်။
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများသည် ပြည်ပနိုင်ငံအကူအညီဖြင့် တည်ထောင်သည့် ကျောင်းမဖြစ်စေရန်နှင့် နိုင်ငံခြား အဖွဲ့ အစည်း အကူအညီဖြင့် တည်ထောင်သောကျောင်း မဖြစ်ရန် ကန့်သတ်ထားပြီး သာသနာပြုကျောင်းမဖြစ်ရဟုလည်း ဥပဒေက ကန့်သတ်ထားသည်။
ယင်းအပြင် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း တည်ထောင်လိုသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်ဟုလည်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများသည် နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးကို ထိခိုက်သော သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်၏ မူဝါဒနှင့် ဆန့်ကျင်သော အကြောင်းအရာများ သင်ကြားမှု၊ လေ့ကျင့်ခန်းပေးမှု သို့မဟုတ် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရဟု ကန့်သတ်ချက်များ ပါရှိသည်။
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာလက်မှတ်မရှိဘဲ ကျောင်းဆရာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခွင့် မရှိသကဲ့သို့ သင်ကြားမှုဘာသာရပ်နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသည့် နိုင်ငံရေး (သို့မဟုတ်) ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ဟောပြောပို့ချခြင်း မပြုရဟုလည်း တားမြစ်ထားသည်။ ဥပဒေပါ အချက်အလက်များကို ကျူးလွန်ပါက ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ်နှင့် ငွေဒဏ် သုံးသိန်းတို့ကို အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။
posted by မင်းနိုင်အောင် at 20:000Comments
ထွက်ပေါ်နေသည့် သတင်းသည် အမှန်ဖြစ်ခဲ့လျှင် ဤသည်နိုင်ငံရေး ပရိယာယ် တစ်ရပ်သာ ဖြစ်ကြောင်း KIO ဒု-နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဂျိန်း လန်ထောင်က ဆိုပါသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့ နေ့စွဲဖြင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း) သို့ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ပြီး ကချင်ပြည်နယ်၌ ဖြစ်ပွားနေသည့် စစ်ပွဲများ အဆုံးသတ်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်ဟု ထွက်ပေါ်နေသည့် သတင်းသည် အမှန်ဖြစ်ခဲ့လျှင် ဤသည်နိုင်ငံရေး ပရိယာယ် တစ်ရပ်သာ ဖြစ်ကြောင်း KIO ဒု-နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဂျိန်း လန်ထောင်က ဆိုပါသည်။
“ဒါတွေက မျက်လှည့် ပြတာပါဗျာ၊ ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးကနေ ပြည်တော်ကို တောင်းဆိုထားတာပါတဲ့၊ ကျွန်တော် တို့သိပါတယ်၊ ဘယ်ဟုတ်မလဲ၊ ပါလီမန်မှာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာ၊ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ KIO ကို ချေမှုန်းသွား မယ်လို့ သမ္မတကပြောသွားခဲ့တာရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒါတွေဟာ သူကိုယ်တိုင် ခိုင်းတာဖြစ်ကြောင်းဆိုတာ ထင်ရှားလာတယ်လေ၊ အခုမှ လက်ခံတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ရအောင်၊ ဟိုဟာ လုပ်ရအောင်၊ ဒီဟာ လုပ်ရအောင် ပြောတာဟာ သဘာဝ မကျပါဘူး” ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး ဂျိန်းလန်ထောင်က ဆိုပါသည်။
၂၀၁၁ ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့မှ KIO နှင့် စစ်အစိုးရကြား တင်းမာမှု စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ ဇွန်လ (၁၃) ရက်အထိ KIO က မပစ်ခတ်ရန် စောင့်ဆိုင်း ခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံး အခြေအနေရ တိုက်ပွဲကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ရသည်။
အစိုးရဖက်က KIA နှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို ဖျက်ခဲ့သည့် အကြောင်းမှာ KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် တာပိန်ရေအား လျှပ်စစ်လုံခြုံရေး ကိစ္စ အငြင်းပွားမှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင် KIO ဆက်ဆံရေးရုံးမှ ဒုတပ်ကြပ် ချမ်းရင်းကို နအဖတပ်မှ နှိပ်စက်၍ သတ်ဖြတ်ခဲ့ရာမှ စတင်ပြီး ယခုချိန်ထိ (၆) လ ကျော်ကြာတိုက်ပွဲများဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
ထိုအတောအတွင်း KIA နှင့် နအဖတို့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရန် အကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးမှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း သဘောတူညီချက် တစုံတရာမရရှိသေးပေ။
posted by မင်းနိုင်အောင် at 19:090Comments
ကလေးသူငယ်များအား ကူးသန်း ရောင်းဝယ်နေခြင်းသည် တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ်အား အလောင်းအစား ပြုလုပ်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ ကလေးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနေ့၌ လူထုခေါင်းဆောင်
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲ့ဆောက်မြို့တွင် ကလေးကူးသန်း ရောင်းဝယ်မှုတားဆီးရေးအဖွဲ့ - Burma ACT အဖွဲ့မှ ဦးစီး ပြုလုပ်သည့် ယင်းအထိမ်းအမှတ်နေ့ပွဲသို့ ပေးပို့သည့် ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းမှတဆင့် ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကလေးသူငယ်တွေကို ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး လုပ်တယ်၊ ကျမတုိ့ရဲ့ အနာဂတ်ကို ကုန်ကူးတယ် ဆိုတာဟာ အင်မတန်မှ မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ။ ဒါဟာ လူသားမဆန်တဲ့အပြင် အင်မတန်မှ ပညာမဲ့တဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ လောင်းကစားလုပ်နေသလိုပါပဲ” ဟု လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုသည်။
အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးများအား လူကုန်ကူးခြင်းအား ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်၍ နိုင်ငံတကာက ပူးပေါင်း တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်သည့် ပါလာမိုစာချုပ် စတင်အသက်ဝင်သည့် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ကို အစွဲပြု၍ ကလေးကူးသန်းရောင်းမှုဆန့်ကျင်ရေးနေ့အဖြစ် နိုင်ငံတကာက သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းအထိမ်းအမှတ်ပွဲကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲ့ဆောက်မြို့ရှိ CDC ကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကာ ကျောင်းသား
ကျောင်းသူ၊ ဆရာဆရာမ၊ ကျောင်းသားမိဘများ၊ ဒီမိုကရေစီရေး လုပ်ဆောင်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ တက်ရောက် ခဲ့ပြီး လူအင်အား ၂၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။
ကလေးများအား ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်းအား ယနေ့မှတင်မဟုတ်ဘဲ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအား ကလေး ကူးသန်း
ရောင်းဝယ်မှု ဆန့်ကျင်ရေး အဖြစ် သတ်မှတ်ရလည်း လူထုခေါင်းဆောင်က ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းမှ တိုက်တွန်းထားသည်။
“ကလေးတွေဟာ ရိုးရိုးလေးပြောရရင် သူတို့ကို မွေးပေးပါဆိုပြီးတော့ ဒီလောကကြီးထဲကို ရောက်လာတာ မဟုတ် ပါဘူး။ လူကြီးတွေက မွေးလိုက်လို့ ရောက်လာတာတဲ့ ကလေးလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့ လူကြီး
တွေ အားလုံးဟာ ကျမတို့ အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ ရင်သွေးလေးတွေအတွက် တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ ကို နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း သတိရပြီးတော့၊ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဟာ ကလေးသူငယ်များ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဆန့်ကျင်ရေးနေ့ဆိုပြီးတော့ ကျမတို့ စွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်ထားဖို့ လိုတယ်” ဟု လူထုခေါင်းဆောင်က ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအရ ၂ဝ၁၁ ဇွန်လအထိ လူကုန်ကူးမှု ပေါင်း ၆၈ မှုရှိပြီး တရားခံ ၁၆ဝ ဦးကို ဖမ်းမိထားသည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ၂ဝဝ၆-၂ဝ၁ဝ ငါးနှစ်စီမံကိန်းအတွင်း လူကုန်ကူးမှုပေါင်း ၃၂၆ မှုရှိခဲ့ပြီး အများဆုံးမှာ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းတို့ ဖြစ်ကြောင်း လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့ ဒုရဲမှူးကြီး ရာလျှံမုန်းကို ကိုးကား၍ ပြည်တွင်းထုတ်7days ဂျာနယ်တွင် ပါရှိသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ၇၃ မှုသာ ရှိခဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင်မူ ၂၅၃ မှုထိ ရှိသည်။
ယခုကဲ့သို့ ကလေးကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုမြင့်မားရခြင်းမှာ စားဝတ်နေရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာကြောင့်ဟု Burma Act အဖွဲ့က သုံးသပ်ထားသည်။ Burma Act အဖွဲ့မှာ ကလေးသူငယ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ပပျောက်ရေး အတွက် ပညာပေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
“စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေတော့ မိဘတွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရှာဖွေနေရတယ်။ ကလေးတွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေတော့ အလုပ်လုပ် ပိုက်ဆံများများပေးရင် သူတို့ကိုယ်တိုင် လိုက်တာတွေ ရှိတယ်။
နောက်ပြီး ကလေးတွေ ရောင်းစားလို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ အသိတွေကို ပြောင်းလဲ မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး ။ ကလေးကို ရောင်းစား ရင် ပြစ်မှုမြောက်တယ်၊ ရာဇဝတ်မှု မြောက်တယ်ဆိုတာ သူတို့ မသိဘူး။ စာဝတ်နေရေး အဆင်မပြေတော့ သိဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေပေါ့” ဟု Bumra Act အဖွဲ့တာဝန်ခံ ဒေါ်နန်းမူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကလေးငယ်များမှာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်း ခံနေရသည့် အပြင် ပြည်တွင်းတွင်လည်း တောမြို့မှ မြို့ကြီးများပေါ်သို့ အိမ်စေအဖြစ် ကူးသန်းခံနေရသည်။ ယင်းအပြင် အစိုးရစစ်တပ်များတွင်လည်း စစ်သားသစ်စုဆောင်းသည်ဟုဆိုကာ လိမ်ညာရောင်းချခံနေရခြင်း များလည်း ရှိသည်။
“တရုတ်နယ်စပ်မှာ မယားအဖြစ် ရောင်းစားတာ ရှိတယ်။ ထိုင်းဘက်မှာတော့ သူတောင်းစား လုပ်ခိုင်းတာ၊ ဘိန်းရောင်းခိုင်းတာ၊ ပြည့်တာဆန်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ကလေးတွေကို ပင်လယ်ထဲမှာ လွှတ်ပြီး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာ
ရောင်းစားခံရတာတွေရှိတယ်” ဟု ဒေါ်နန်းမူက ဆိုသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ရောင်းချခံရသူများကို ကယ်ဆယ်ရမည့်အပြင် လွတ်မြောက်လာသူများကိုလည်း ပြန်လည် ထူထောင်ပေးရန်အတွက် လိုအပ်ကြောင်း လူထုခေါင်းဆောင်က သတိပေးထားသည်။
“ဒီကလေးတွေရဲ့ ဘဝတွေကို ပြန်လည်ထူထောင်ပေးဖို့ဆိုတာဟာလည်း အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလည်း ကျမတို့
မေ့လို့မရပါဘူး။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကနေပြီးတော့ ကူညီပေးတယ်၊ မစပေးတယ်၊ ကယ်ထုတ် ပေးလိုက်ပြီးတဲ့ အခါကျရင် ဒီကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်ကို ပြန်လည်ပြီးတော့ ထူထောင်နိုင်ဖို့ ဆက်ပြီးတော့ အကူအညီ
တွေ အများကြီး လိုပါတယ်။ အဲဒါအတွက်လည်း ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ကြ ပါလို့ ကျမအနေနဲ့ သတိပေး ချင်ပါတယ်” ဟု လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းမှ တဆင့် ပြောကြားခဲ့သည်။
posted by မင်းနိုင်အောင် at 19:050Comments
ကရင်နီပြည်သူများ၏ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုလုံလောက်စွာ ရရှိခံစားနိုင်စေရန်အတွက် ဂျပန်အစိုးရမှ မြန်မာအစိုးရအား တွန်းအားဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်သည်ဟု KNPP က ဆိုသည်။
ကရင်နီပြည်နယ်ရှိ လောပိတအမှတ်-၂ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံကို ပြန်လည်မွမ်းမံပါက စက်ရုံအနီးတ၀ိုက်တွင် နေထိုင်သည့် ကရင်နီပြည်သူများ၏ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုလုံလောက်စွာ ရရှိခံစားနိုင်စေရန်အတွက် ဂျပန်အစိုးရမှ မြန်မာအစိုးရအား တွန်းအားဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်သည်ဟု KNPP က ဆိုသည်။
“အထူးသဖြင့် ဒီဒေသတ၀ိုက်မှာနေထိုင်တဲ့ လူထုတွေဟာ စက်ရုံတည်ဆောက်တုန်းက အဓိက ဆိုးကျိုးခံခဲ့ရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ ထွက်လာတဲ့ရလဒ်ကလည်းပဲ သူတို့က အဓိက ခံစားရမယ့်လူ ဖြစ်သင့်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲသလို မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျနော်တို့ ကရင်နီပြည်သူတရပ်လုံးကလည်းပဲ မီးအလုံအလောက်ရတဲ့ အဆင့်မှာ မရှိဘူးဆိုတော့ ကျနော်တို့ အကျိုးခံစားခွင့်ဟာ ဒေသခံတွေမှာ ဘာမှ မရှိဘူး ဆိုတာကို ဂျပန်အစိုးရကိုပြန်ပြီး စဉ်းစားစေချင်တယ်” ဟု ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ KNPP မှ အတွင်းရေးမှူး-၁ ခူဦးရယ်က ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၃-၄၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်များက ဂျပန်အစိုးရမှ လူမှုရေးစာနာထောက်ထားသည့် အကူအညီဖြင့် လောပိတရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံကို ပြန်လည်မွမ်းမံခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါတွင် စက်ရုံတခုလုံးအား ပြန်လည်မွမ်းမံရန် လိုအပ်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုတခါ ဂျပန်အစိုးရအနေဖြင့် လောပိတရေအားလျှပ်စစ်အား ပင်လယ်ရပ်ခြားဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီ - Oversea Development Assistance အထောက်အပံ့ဖြင့် ပြန်လည်မွမ်းမံရန် ထောက်ပံ့ကူညီသွားမည်ဆိုပါက အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအရေးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရန် လိုသည်ဟု ဆိုသည်။
“စီမံကိန်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဆိုးကျိုးများကို ဦးစွာ ခံစားရမည့်သူများ ဖြစ်သကဲ့သို့ အကျိုးရလဒ်ကို ဦးစားပေးစံစားရမည့်သူများ ဖြစ်သည်ကို ဂျပန်အစိုးရနှင့် ဗမာအစိုးရတို့အနေဖြင့် သိရှိထားသင့်ပြီး ကူညီပံ့ပိုးမှုကို အလေးပေးစဉ်းစားပေးသင့်ပါကြောင်း မိမိတို့မှ အလေးအနက်ထား တောင်းဆိုအပ်ပါသည်” ဟု KNPP မှ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဂျပန်အစိုးရမှ လောပိတရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံအား ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံသွားမည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို မကန့်ကွက်သော်လည်း ရရှိလာသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ကရင်နီပြည်သူများအနေနှင့် မျှဝေခံစားခွင့်ရရှိရန် မြန်မာအစိုးရကို ဖိအားပေးသည့်သဘောသာဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
လောပိတ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ စီမံကိန်းစတင်တည်ဆောက်ခဲ့စဉ်က ဒေသခံကရင်နီပြည်သူ ၁၂၀၀၀ ကျော်တို့သည် မိမိတို့ နေရပ်ရင်းမှ အတင်းအဓမ္မ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း ခံခဲ့ကြရသည်။ မြန်မာအစိုးရမှ စီမံကိန်းလုံခြုံရေးကို အကြောင်းပြချက်ဖြင့် တပ်အင်အားများ တိုးချဲ့ချထားခဲ့ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံနှင့် မြန်မာပြည်သို့ သွယ်တန်းထားသည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားတာဝါတိုင်များ၏ လုံခြုံရေးတို့အတွက် မြေမြှုပ်မိုင်း အလုံးပေါင်း ၁၈၀၀၀ ခန့် ထောင်ထားခဲ့သည်ဟု နိုဝင်ဘာလ-၂ ရက်နေ့က ကရင်နီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး သုတေသနအဖွဲ့ KDRG မှ ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် ကြေညာချက်ထဲတွင် ဖော်ပြထားသည်။
“ဒီနေ့အထိ လောပိတ အနီးတ၀ိုက်မှာ မြေမြုပ်မိုင်းတွေ ရှိနေတုန်းပါပဲ” ဟု KDRG တာဝန်ခံ ခူတော်ရယ်က ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က ဂျပန်အစိုးရနှင့် မြန်မာအစိုးရတို့၏ နှစ်နိုင်ငံ၊နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ တွေ့ဆုံခဲ့ကြစဉ်က ကရင်နီပြည်နယ် လောပိတအရပ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် အဆိုပါ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံအား အိုဒီအေ အကူအညီဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ရန် သဘောတူခဲ့ကြသည်။
မြန်မာပြည်၏ ဆိုးဝါးလှသော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့သည့်အတွက် ဂျပန်အစိုးရမှ မြန်မာပြည်အား ပေးနေသည့် အိုဒီအေအထောက်အပံ့ကို ၁၂နှစ်ခန့် ရပ်တန့်ထားပြီးမှ ယခုတခါ ပြန်လည်ပေးသွားရန် ပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လောပိတ ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံကို ၁၉၆၀ ခုနှစ်အနှောင်းပိုင်းတွင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း မြန်မာပြည်အပေါ် တင်ရှိနေသည့် စစ်လျော်ကြေးဖြင့် ဂျပန်အစိုးရ၏ အကူအညီနှင့် စတင်တည်ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၁၆၈ မီဂါဝပ်ရှိ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ထုတ်လုပ်ပေးလျက်ရှိသည်။
ကရင်နီပြည်နယ်တွင် လောပိတ ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံ အမှတ်-၁နှင့် အမှတ်-၂ ဟူ၍ရှိသော်လည်း အဆိုပါစက်ရုံမှ ထွက်ရှိသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အားအများစုကို မြန်မာပြည်ရှိ ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့အပြင် အစိုးရလုပ်ငန်းစက်မှုဇုံနယ်များတွင်သာ အဓိက ပို့ဆောင်အသုံးပြုနေပြီး ဒေသခံကရင်နီပြည်သူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ယနေ့တိုင် လျှပ်စစ်မီးများ ရရှိခံစားရခြင်းမရှိကြသေးကြောင်း သိရသည်။
posted by မင်းနိုင်အောင် at 18:590Comments
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြစ်ကြောင်းတွင်း ပူးတွဲကင်းလှည့်တပ်ဖွဲ့ ကင်းလှည့်နေတုန်း မဲခေါင်မြစ်တွင်းမှာ လက်နက်ကိုင် တပ် ဖွဲ့တဖွဲ့နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး မြန်မာစစ်သား ၃ ဦး အသတ်ခံရတယ်လို့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သတင်းရပ်ကွက်က ဆိုပါတယ်။ မြန်မာ၊ လာအို ပူးတွဲကင်းလှည့်တပ်ဖွဲ့ဟာ နော်ခမ်းခေါင်းဆောင်တယ်လို့ ယုံကြည်ရတဲ့ အဖွဲ့နဲ့ မနေ့က ရွှေတြိဂံဒေသ မြောက်ဘက် ကီလိုမီတာ ၂၀လောက်မှာ ရှိတဲ့ ဘန့်ဒုံဆမ်ပု အရပ်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အောက်တို ဘာလ ၅ ရက်က အဲဒီနားမှာပဲ တရုတ်သင်္ဘောသား ၁၃ ယောက် အသတ်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။
မဲခေါင်မြစ်ကြောင်းတလျှောက် လုံခြုံရေးပေးဖို့ တပ်ဖြန့်ထားတဲ့ မြန်မာနဲ့ လာအိုစစ်သားတွေနဲ့အတူ လုံခြုံရေးပူးတွဲ ယူ တဲ့အနေနဲ့ ယူနန်ပြည်နယ်၊ ကွမ်းလေဆိပ်ကမ်းကနေ ချင်းရိုင်းနယ်၊ ချင်းဆန်ဆိပ်ကမ်းကို ခုတ်မောင်းလာတဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကုန်တင်သင်္ဘော ၉စင်း စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ မော်တော်ဘုတ် ၁၁စင်းနဲ့အတူ လက်နက်ကိုင်ရဲတွေကို တရုတ်က ပို့ပေး ခဲ့ချိန်မှာ ဒီတိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ တရုတ်ပြည်က သူတို့ သင်္ဘောသာတွေသေဆုံးပြီးနောက်မှာ မြန်မာ၊ လာအို၊ ထိုင်းနဲ့ပူးတွဲဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် မဲခေါင်မြစ်အတွင်းကင်းလှည့်ဖို့ မော်တော်ဘုတ်တွေနဲ့အတူ လက်နက်ကိုင်ရဲ အင်အား ၃၀၀ ကျော် ကို တပ်ဖြန့်ထားပါတယ်။
တရုတ်ပြည် ကွမ်းလေဆိပ်ကမ်းကနေ ရွှေတြိဂံထိ သွားလာတဲ့ မြစ်ကြောင်း ကင်းလှည့်တပ်ဖွဲ့နဲ့အတူ ထိုင်းအာဏာပိုင် တွေက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီး သူတို့တာဝန်ကတော့ ရွှေတြိဂံကနေ ချင်းဆန်ဆိပ်ကမ်းထိ ကင်းလှည့်ဖို့ တဦး တည်း တာဝန်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်သင်္ဘောသား ၁၃ ယောက်ဟာ တရုတ်နယ်စပ်တောင်ပိုင်း၊ မြစ်ကြောင်းပိုင်းမှာ အသတ်ခံရတာဖြစ်ပြီး တရုတ်က မူးယစ်ဆေးဝါး စစ်ပွဲ တွေနဲ့မှောင်ခိုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ ဒီဒေသကို ဖြတ်ပြီး တောင်ပိုင်းကိုသွားနေတဲ့ သင်္ဘောသားတွေနဲ့ကုန်တင် သင်္ဘောတွေ ဘေးကင်လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်နေပါတယ်။
ဒီတရုတ်သင်္ဘောသားတွေ အသတ်ခံရမှုနဲ့ ထိုင်းရဲတွေက စစ်သား ၉ ဦးကို ဖမ်းထားပါတယ်။ ထိုင်း၊ အမှတ် ၃ တပ်တော် ရဲ့ ဖမောန်အထူးတပ်ဖွဲ့မှာ တွဲဖက်ထားတဲ့ အရာရှိ ၉ယောက်ကို လူသတ်မှုနဲ့ တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ သူတို့ကတော့ ဒီ စွဲဆိုချက်ကို ငြင်းပယ်ပြီး နော်ခမ်းခေါင်း ဆောင်တဲ့ ဗမာပြည်၊ ရှမ်းပြည်နယ်က မူးယစ်ဆေးဝါးကူးသန်းရောင်းဝယ်နေတဲ့ ဂိုဏ်းမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုပါတယ်။ ကနဦးထွက်ဆိုချက်မှာ သူတို့မဲခေါင်မြစ်ကြောင်းထဲ ၀င်တဲ့အချိန် မှာ အရာရှိ ၉ ဦးက ဟွာဖင်းနဲ့ ယုရှင်း သင်္ဘော ၈စင်းကို ကြားဖြတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်။ သင်္ဘောပေါ်မှာ မြင်းဆေး (ယာဘ) အလုံးပေါင်း ၉၂၀,၀၀၀ တွေ့ခဲ့တယ်။ ရေထဲမှာ သင်္ဘောသားတွေရဲ့အလောင်းတွေတွေ့တော့ စစ်သားတွေဟာ လူသတ် သမားတွေအဖြစ် သံသယ ဖြစ်ခံရသူတွေ ဖြစ်လာတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စစ်သား ၉ ယောက်အပေါ် စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုကို စဉ်းစားပေးဖို့အတွက် အရှေ့နေချုပ်ရုံးကို အခု တင်ပြထားပါတယ်လို့ အမှတ် (၅) ရဲတိုင်း၊ ဒုတိယ အကြီးအကဲ ရဲ ဗိုလ်ချုပ် ဆစ်သီပေါန်ဆရီချန်ထာ့ပ် က မနေ့က ပြောပါတယ်။ ဒီအမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ရှေ့နေတွေနဲ့ ရဲတွေပါတဲ့ အ ဖွဲ့တဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်လို့ ရဲဗိုလ်ချုပ် ဆစ်သီပေါန်က ပြောပါတယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားက သက်သေ တွေကို မေးမြန်းဖို့ လိုနေတုန်းပါပဲလို့ သူက ပြောပါတယ်။
posted by မင်းနိုင်အောင် at 18:440Comments
ဒုက္ခသည် ၄၅၀၀ ကျော်သည် အစားအစာ၊ ရေနှင့် ဆေးဝါး အကူအညီများ အရေးပေါ် လိုအပ်နေကြောင်း ဒုက္ခသည်များပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ် အရှေ့ဘက် တရုတ်နယ်စပ်တစ်လျှောက် ကန်ပိုင်တီနှင့် ဒဘက်ချောင်းကြား နယ်ခြားမှတ်တိုင် ၅ နှင့် ၁၄ ကြားရှိ ဒုက္ခသည် ၄၅၀၀ ကျော်သည် အစားအစာ၊ ရေနှင့် ဆေးဝါး အကူအညီများ အရေးပေါ် လိုအပ်နေကြောင်း ဒုက္ခသည်များပြောသည်။
“မြစ်ကြီးနားမြို့ ဗန်းမော်ဘက်တော့ အဆင်ပြေတယ်လို့ကြားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ချောင်မှာဆိုတော့ ဒီကနေထပ်ပြေးဖို့လည်းမရှိတော့၊ ခုလောလောဆယ်က စောင့်နေရုံပဲရှိတယ်။ ဆန်ကတော့ ရှန်လောတ် (KIO)တွေကပေးနေတာ၊ ဆန်တမျိုးထဲကိုတော့ အချိန်မှီ စားနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးတယ်။ ကျန်တာကတော့ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် ရှာစားတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဆရာတွေဆိုတော့ ကျွေးတာနဲ့ အသက်ဆက် ရှင်သန်နေကြတယ်။” ဟု နယ်ခြားမှတ်တိုင် ၁၃နှင့် ၁၄ ကြားရောက်ရှိနေသူ ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာတစ်ဦးပြော သည်။
နယ်ခြားမှတ်တိုင် ၅ နှင့် ၆ ကြားတွင် ဒုက္ခသည် ၁၀၀ ကျော်၊ နယ်ခြားမှတ်တိုင် ၇ နှင့် ၈ ကြားတွင် ဒုက္ခသည် ၆၀၀ ကျော်၊ နယ်ခြားမှတ်တိုင် ၁၀ တွင် ဒုက္ခသည် ၁၀၀၀ ကျော်နှင့် နယ်ခြားမှတ်တိုင် ၁၃ နှင့် ၁၄ ကြားတွင် ဒုက္ခသည် ၂၆၀၀ ကျော် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
၀ိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းမှ ထိုဒုက္ခသည် ပေါင်း ၄၅၀၀ ကျော်သည် နိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှ ထိုနေရာသို့ရောက်ရှိ၍ ယခုချိန်ထိ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) က ထောက်ပံ့သောဆန် (လူတဦးလျှင်တနေ့ ဆန်နို့ဆီ ၂ ဗူးနှုန်း)ကို အဓိက မှီခိုနေရသည်ဟု ဆိုသည်။
“အာလူးတောင်မစားနိုင်တော့ဘူး၊ အသားကတော့မပြောနဲ့တော့။ ကြာလာရင်တော့ ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲ။ ဘာမှ စိုက်ပျိုးလို့မရဘူး။ ခဏတဖြုတ်တော့ နေလို့ရတယ်။” ဟု ဆက်ဆိုသည်။
ထိုနယ်စပ် စခန်း ၄ ခုသည် တခုနှင့် တခုကြားတောင်ပေါ်ခရီးကို ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွားလျင် ၄ နာရီကြာ၍ မြောက်ဘက်အကျဆုံး မှတ်တိုင် ၅ နှင့် ၆ ကြားရှိစခန်းသည် အအေးဆုံးနှင့် စားဝတ်နေရေး အခက်ဆုံးဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
“NGO တွေလာဖို့ရှိမယ်လို့တော့ထင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရောက်တာတော့ တလရှိပြီ။ လာရောက်လည်ပတ်ပြီးခွန်အားပေးကြပါ” ဟု မှတ်တိုင် ၁၃ နှင့် ၁၄ ကြား ရောက်ရှိနေသူ ဆရာတဦးပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်သည့်ကချင်လူမျိုးများ လာရောက်လှူဒါန်းမှု အချို့ရှိသည်သော်လည်း နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ အကူအညီမရရှိဟု သိရသည်။
ထိုဒုက္ခသည်စခန်းများအတွက် တစ်ခုတည်းသောဆေးပေးခန်းမှာ ဇိုင်းအောင်စခန်းအနီး မုန်ဂါဇွပ်ရှိ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်မှ ဖွဲ့လှစ်ထားသောဆေးခန်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကိရိယာတန်ဆာပလာမပြည့်စုံဘဲ ဆေးဝါးများသည် စားပွဲခုံတလုံးပေါ်တွင် တင်ထားသမျှသာဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“အဆင်မပြေတဲ့နေရာမှာ ဒုတိယလိုက်တာက သောက်ရေ၊ ရေက အောက်ဘက်မှာ သေးသေးလေး။ လူက ရာချီပြီးခပ်သောက်၊ အဲမှာ အချင်းချင်းပြန်တိုး၊ တိုက်ကြ။ ရေတခါ ခပ်နိုင်ဖို့အရေး နာရီိပိုင်းနဲ့စောင့်ရတာ။” ဟု သောက်ရေသုံးရေ အခက်အခဲကို ဇိုင်းအောင်စခန်းမှ ကချင်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ယခုချိန် ထိုဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းမှ နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာကြသူများ ရောက်လာနေကြဆဲဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တွင် ၆ လကျော်ကြာ မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့် KIO ကြား တိုက်ပွဲများကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးကြသူများ ၅၀၀၀၀ ကျော်ပြီဟု WPN မှ ပြောသည်။
posted by မင်းနိုင်အောင် at 18:400Comments
စင်္ကာပူရောက် မြန်မာ အမျိုးသမီး တစ်ဦးလို့ ယူဆရသူ တစ်ဦးဟာ ယဉ်များအလွန် ကြပ်လေ့ရှိတဲ့ လမ်းပေါ်သို့ မိုးပျံလမ်းပေါ်မှ ခုန်ချခဲ့တာကြောင့်
စင်္ကာပူရောက် မြန်မာ အမျိုးသမီး တစ်ဦးလို့ ယူဆရသူ တစ်ဦးဟာ ယဉ်များအလွန် ကြပ်လေ့ရှိတဲ့ လမ်းပေါ်သို့ မိုးပျံလမ်းပေါ်မှ ခုန်ချခဲ့တာကြောင့် အခုဆေးရုံ တင်ထားရကြောင်း စင်္ကာပူ သတင်းစာ တစ်စောင်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မိုးပျံလမ်း Kallang-Paya Lebar နှင့် the Pan-Island အဝေးပြေးလမ်း Sims လမ်းမကြီးတို့ ဆုံရာနေရာသို့ ခုန်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ အိမ်ပေါ်လုပ်နေသူ တစ်ဦး ဖြစ်မည်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ယင်းမိန်းကလေးဟာ ခုန်မချခင် Katong Shopping Centre ရှိ အိမ်အကူအလုပ်သမား ရှာဖွေပေးရေး အေဂျင်စီမှ ထွက်ပြေး လာတာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်မြင်များ၏ ပြောပြချက်အရ သူမဟာ မိုးပျံလမ်းရဲ့ အစွန်းက ပန်းခင်းပေါ်မှာ မက်တက်ရပ်ပြီး လက်တွေကို ဆန့်တန်းကာ အောက်ကို ခုန်ချတာလို့ သိရပါတယ်။
တက်စီမောင်းသူ တစ်ဦးမှ မိန်းကလေးကို လမ်းဘေးဖယ်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ကို အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းအမျိူး သမီးဟာ ပြုတ်ကျလာတဲ့ အချိန်မှာ သစ်ကိုင်း တစ်ကိုင်းပေါ်ကို တစ်ဆင့်ပြုတ်ကျပြီး သစ်ကိုင်းလည်း ကျိုးကျခဲ့ပါတယ်။ သစ်ကိုင်းပေါ်က တဆင့် ကျလာခဲ့တဲ့အတွက် အရှိန်အနဲငယ်ကို လျော့ပါးသွားစေခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ လမ်းမဘေးက ကားတွေ လမ်းမကြီးပေါ်ကနေ အရေးပေါ်ဘေး ထိုးထားဖို့ နေရာလေးပေါ်ကို ပြုတ်ကျလာပြီး ညာဖက်လက်နဲ့ ဘယ်ဖက်ခြေထောက် ကျိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ Tan Tock Seng ဆေးရုံကို သယ်ဆောင်သွားတဲ့အချိန်မှာ သူဟာ ဝေဒနာများ ခံစားနေရသော်လည်း သတိတော့ကောင်းစွာ ရနေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကိုအခု အရေးပေါ်ဆောင်မှာ ထားပြီး လုံးဝလှုပ် ရှားခွင့် မပေးထားပါဘူး။
အဲဒီလို မလုပ်ခင်မှာ သူဟာ သူ့ကိုယ်သူ အဆုံးစီရင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို တစ်ခြား အိမ်အကူ အမျိုးသမီးတွေကို ပြောပြခဲ့ တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဘာကြောင့်အဲသည် လိုဆန္ဒရှိနေတယ် ဆိုတာကိုတော့ မပြောခဲ့ပါဘူး။
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ မြန်မာမိန်းကလေးများ အမြင့်မှ ခုန်ချပြီး သေကြောင်းကြံမှုဟာ အစဉ်အလာ တစ်ခုလို ဖြစ်လာနေပြီး မခိုင်သင်ဇာ နှင့် မယဉ်ငြိမ်းပွင့် ပြီးလျှင် ယခုမိန်းကလေးမှာ တတိယမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။
posted by မင်းနိုင်အောင် at 18:38 1 Comments
။ ‘ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားများ ပညာရေး ရန်ပုံငွေ ဂီတပွဲနှင့် ဈေးရောင်းပွဲတော်’ကို ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏ အားကစားကွင်း၌ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပရန် ကြေငြာထားသော်လည်း ပွဲမိန့် မရသဖြင့် ကျင်းပမည့်ရက်အား ဒီဇင်ဘာလ နောက်ဆုံးအပါတ်သို့ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး
“သေချာကတော့ ၁၅ ရက်နေ့မှာ မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ နောက်ထပ် မရွှေ့ရအောင် ရက်ကို ကျနော်တို့ ညှိနေတုန်းပါ။ ပွဲခွင့်ပြုမိန့်ကိစ္စကို ကြိုးစားရင်းက ရက်ရွှေ့ရတာပါ” ဟု ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီ ပြန်ကြားရေးမှူး ဦးအုန်းကြိုင် က ပြောသည်။ ရန်ပုံငွေ ဂီတပွဲကျင်းပမည့် နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့်နေရာတို့ကို ပြန်လည် သတ်မှတ်ကာ ကြေငြာပေး မည်ဟု ဆိုသည်။
ယင်းရန်ပုံငွေ ဖျော်ဖြေပွဲကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ၊ ပညာရေးကွန်ယက် အဖွဲ့များနှင့် အနုပညာရှင် များက ပူးပေါင်းစီစဉ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဂီတတေးသံရှင် ၅၀ ကျော်တို့ သောကြာနေ့ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီကတွေဆုံစဉ်
ဂီတပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီအထိ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အားကစားကွင်း တာဝန် ရှိသူများနှင့် ကြိုတင် ညှိနှိုင်းရယူခဲ့သော်လည်း အားကစားကွင်း မအားလပ်သဖြင့် ပွဲအစီအစဉ်များ ဖျက်သိမ်းပေးရန် ဒီဇင်္ဘာလ ၉ ရက်နေ့က ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီထံ အားကစားကွင်း တာဝန်ရှိသူများက ဆက်သွယ် ပြောဆို ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရထံသို့လည်း လိုအပ်သည့် အထောက်အထား အပြည့်အစုံဖြင့် ပွဲကျင်းပခွင့် အတွက် ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က လျှောက်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်သော်လည်း ယနေ့အချိန်ထိ တစုံတရာ အကြောင်းပြန်ခြင်း မရှိသေးပေ။
NLD ဦးစီးကျင်းပသော ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားများ ပညာရေး ရန်ပုံငွေ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲနှင့် ဈေးရောင်းပွဲတော်မှာ ပွဲမိန့်မရသဖြင့် ရက်ပြောင်းရွှေ့ သတ်မှတ်ရ (ဓါတ်ပုံ /nldburma.org)
“အနုပညာရှင်တွေက ကျနော်တို့ကို ကူညီရတာဆိုတော့ သူတို့ မအားတဲ့ကြားက အချိန်တွေ ပြန်ညှိရတယ်။ ရက်ရွှေ့လိုက်တော့ ရောင်းထားတဲ့ လက်မှတ်တွေအတွက်လည်း ပြန်တောင်းပန်ပြီး ဒီဇင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်ထဲမှာ လုပ်မယ်ဆိုပြီး ပြောပြနေရတယ်” ဟု ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဂီတအနုပညာရှင်များ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး တိုင်းရင်းသားများ ပညာရေးအတွက် ကူညီရန် ဂီတရန်ပုံငွေပွဲ ကို စီစဉ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲတွင် Emperor ၊ Metalzone ၊ Lazy Club ၊ Big Bag ၊ Plus3၊ Spectrum ၊ Reason ၊ Wanted ၊ Vertical Vibration ၊ The Tree အစရှိသည့် တီဝိုင်းများ နှင့်အတူ နာမည်ကျော် ဂီတ အနုပညာရှင် ၅၀ ကျော်က
မေတ္တာဖြင့် ကူညီသီဆိုကြမည် ဖြစ်သည်။
ပွဲလက်မှတ် ဈေးနှုန်များမှာ ကျပ် ငါးထောင်မှ ကျပ်သုံးသောင်းအထိ ရှိပြီး ကြိုတင်လတ်မှတ် ရောင်းချထားရာ ကျပ် ၁၅ သိန်းခန့် ရရှိထားသည်ဟု ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီက ပြောသည်။
posted by မင်းနိုင်အောင် at 18:320Comments
ဂီတလောကသားတွေရဲ့ မကျေလည်မှု ဘယ်တော့ရှင်းပေးနိုင်မလဲ
ဘက်ပေါင်းစုံက ပွင့်လင်း မြင်သာမှုတွေ ရှိလာပြီဆိုတဲ့ လက်ရှိအစိုးရလက်ထပ်မှာ ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကတော့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာ မူဝါဒနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဂီတလောကသားတွေ အကြားမှာတော့ မကျေလည်တဲ့ အသံတွေ ကြားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂီတအစည်းအရုံးကနေပြီး ဂီတသမားတွေ ဖန်တီးသီဆိုထားတဲ့ တေးသီချင်းတွေကို ဘယ်နေရာမှာမဆို စီးပွားရေးအရ သုံးစွဲခွင့်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အလွှာလိုက် ပေးဆောင် အသုံးပြုကြမယ် ဆိုပေမယ့် အဲဒီကိစ္စကို ဘာမှ ဆောင်ရွက်မပေးမှုအပေါ် အဆိုတော် သားစိုးနဲ့ ဂီတ လောကသား တချို့က အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“သီချင်းတွေကို အလွှာလိုက် ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုပြီး ဖြစ်မလာတာ ကျနော်တယောက်တည်းတင်မဟုတ်ဘူး။ တခြားဂီတသမားတွေလည်း အဲဒီကိစ္စကို သိချင်နေကြတယ်။ ဂီတအစည်းအရုံးအနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းပေး စေချင်ပါတယ်” လို့ သားစိုးက ပြောပါတယ်။
ဂီတအစည်းအရုံးအနေနဲ့ သီချင်းတပုဒ်ကို စီးပွားရေးအရ အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ ရေး၊ ဆို၊ တီး၊ အသံဖမ်း၊ ဖြန့်ချိစသဖြင့် အလွှာ အသီးသီးအလိုက်ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ နှုန်းထားအတိုင်းပေးဆောင် အသုံးပြုရမယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ပေးထားခဲ့တာပါ။
“၂၀၀၉ ခုနှစ် နှစ်ကုန်တုန်းကပဲ FM တွေက ကျနော့်သီချင်းကို ထုတ်လွှင့်ခအဖြစ် တနှစ်လုံးစာ အတွက် ကျပ် ၈၀၀၀ ပေးဖူးပါတယ်။ အဲဒီကစပြီး မရလိုက်တာ အခု ၂၀၁၁ နှစ်ကုန်အထိပါပဲ” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ပြည်တွင်းထုတ် ဂျာနယ်တွေမှာတော့ ဂီတအစည်းအရုံးက FM ရေဒီယိုတွေမှာ တေးသီချင်း သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် သုံးစွဲခအဖြစ် မည်ရွေ့ မည်မျှ ပေးဆောင်သုံးစွဲမယ် ဆိုတာကို ဂီတအစည်းအရုံးအနေနဲ့ ဖြေရှင်း ညှိနှိုင်းမှုတွေ ပြုလုပ်နေတယ်လို့ ရေးထားတာ တွေ့ရပေမယ့်လည်း ယခုလက်ရှိမှာတော့ အဆိုတော်သားစိုးက FM အသံလွှင့်ဌာနတွေ၊ ပြည်တွင်း ရုပ်သံဌာနတွေက သူတို့ရဲ့ တေးသီချင်းတွေကို အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ သုံးချင်သလို အသုံးပြုတယ်လို့ ပြောနေပါပြီ။
“FM တွေ အပါအဝင် MRTV4တို့ Sky Net တို့လို တီဗီ Channelတွေ က သီချင်းတွေကို ကျနော်တို့ဆီက ၀ယ်ပြီးလွှင့်ရမှာကို လွှင့်ချင်သလို လွှင့်ပြီးမှ ဂီတ အစည်းအရုံးကို လာပြီးရှင်းတယ်။ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါတယ်” လို့ သားစိုးက ဆိုပါတယ်။
City FM (ရန်ကုန်) စတင် တည်ထောင်ကာစ အချိန်ကလည်း တေးသီချင်းတွေကို ဖန်တီးသီဆိုသူတွေကို အသိမပေးဘဲ သုံးစွဲခဲ့တဲ့အတွက် ဂီတအနုပညာရှင် အယောက် ၂၀ ကျော် ကန့်ကွက် လက်မှတ်ထိုးပြီး သူတို့ရဲ့ တေးသီချင်းတွေကို အသုံးပြုခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့ဖူးတဲ့ သာဓကရှိခဲ့ဖူး ပါတယ်။
အဲဒီလို ကန့်ကွက်မှုတွေကြောင့် City FM အနေနဲ့ ကန့်ကွက်ထားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ တေးသီချင်းတွေကို ရှောင်ပြီး ထုတ်လွှင့်ခဲ့ရဖူးတာလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
“City FM ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်ဆွေက အဲဒီလို ကန့်ကွက် လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ တေးရေးတွေ၊ အဆိုတော်တွေရဲ့ နာမည်ပါတဲ့ ကြော်ငြာဘုတ်တွေ ဆိုရင် ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့ စည်ပင် နယ်နိမိတ် အတွင်းမှာ ထောင်ခွင့် မပေးဘူး” လို့ တေးရေး ဆရာတဦးက ပြောဖူးပါတယ်။
အဲဒီလို တေးရေးတေးဆို နာမည်ပါတဲ့ ကြော်ငြာဘုတ်တွေကို ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာ ထောင်ခွင့်မရတဲ့အတွက် ထုတ်လုပ်သူ အခက်အခဲ တွေ့ရတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ခိုးကူးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက လွှတ်တော်အထိ တင်ပြထားပြီးပေမယ့်လည်း ဂီတအစည်းအရုံး အနေနဲ့တော့ ဘာမှ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်းကိုလည်း အဆိုတော်သားစိုးက ပြောပါတယ်။
ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးလိုပဲ ဂီတအစည်းအရုံးအနေနဲ့လည်း ဖြေရှင်းစရာတွေ ရှိနေသေးတဲ့အတွက် အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ဂီတလောကသားတွေက မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စီစဉ်တဲ့ပွဲ ဇော်ဝင်းထွဋ်လည်းပါမယ်
ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်းမှာ အဆိုတော် အနုပညာရှင်များ၊ တေးဂီတ၀ိုင်းများစွာ ပါဝင်ပြီး ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲ ကျင်းပမယ် ဆိုတဲ့ ဂီတပွဲကြီးက ပါမစ်မရသလိုလို၊ ပွဲပျက်မလိုလို သတင်းကြားနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီပွဲ ကျင်းပဖြစ်ရင် အင်ပါယာတီးဝိုင်းနဲ့အတူ ရော့ခ်အဆိုတော် ဇော်ဝင်းထွဋ်လည်း ပါဝင် သီဆိုမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ကျနော်က တပုဒ် နှစ်ပုဒ် ၀င်ဆိုဖြစ်မယ်။ တီးဝိုင်းစီစဉ်ပေးမယ်” လို့ ဇော်ဝင်းထွဋ်ကဆိုပါတယ်။
ဒီဖျော်ဖြေပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိသမျှသော တေးဂီတ၀ိုင်းများစွာ ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး အဆိုတော် အနုပညာရှင်ပေါင်း ခန့်မှန်းခြေ ၅၀ နီးပါးလောက် သီဆို ပါဝင်မှာပါ။
ဒီဖျော်ဖြေပွဲကို လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် ပညာရေး ရန်ပုံငွေ အဖြစ် ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
“အရင်ကဆိုရင် တို့မြန်မာပြည်မှာ တခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင် ဟိုဟာကြောက်ရ၊ ဒီဟာကြောက်ရ။ ဟိုမျက်နှာကြည့်ရ ဒီမျက်နှာကြည့်ရတွေက တအားများခဲ့တာကိုး။ အခုက အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ဖေးဖေးမမနဲ့၊ စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ အထူးသဖြင့် အန်တီစုရဲ့ အိုင်ဒီယာတွေ အများကြီးပါပါတယ်။ အန်တီက လုပ်စေချင်တာကိုး။ အဓိကက ပိုက်ဆံရှာတာထက် ပြန်လည် စည်းလုံးညီညွတ်စေတာ မျိုးကို သူက လိုချင်တာ” လို့ အဆိုတော် ဇော်ဝင်းထွဋ်က ဆိုပါတယ်။
သူ့အနေနဲ့ အနုပညာရှင် အများအပြားပါဝင်မယ့် စိတ်ဓာတ်ခွန်အား နိုးကြားစေနိုင်တဲ့ တေးစီးရီးမှာလည်း ပါဝင် သီဆိုသွားဦးမှာလို့ ပြောပါတယ်။
တချိန်က လျှမ်းလျှမ်းတောက် ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ရော့ခ်အဆိုတော် ဇော်ဝင်းထွဋ်ဟာ “မဟာ” တေးစီးရီးခွေ ထွက်ရှိပြီးတဲ့ နောက် အဲဒီအခွေထဲက အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီသီချင်းတွေကြောင့် ပရိသတ် တချို့ရဲ့ ပြစ်တင် ဝေဖန်သံတွေနဲ့ အတူ အောင်မြင်မှုတွေ မှေးမှိန်ခဲ့ရတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ဖူး ပါတယ်။
ယင်းကဲ့သုပရိသတ်ရဲ့ အားပေးမှုအတိုင်းအတာအများဆုံးရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အဆိုတော် စိုင်းထီးဆိုင်ဟာလည်း တေးရေးမြသန်းစံရေးစပ်တဲ့ စစ်အစိုးရ အကျိုးပြုပေါ်လစီ တေးသီချင်းတွေ သီဆိုခဲ့ သည့်နောက်ပိုင်း ပရိသတ်ရဲ့ အားပေးမှုအတိုင်းအတာလျော့နည်းသွားခဲ့တာတော့ အမှန်ပါ။
၁၅ ရက်နေ့ပွဲကို ပရိသတ်က မျှော်လင့်နေသလို ပါဝင်မယ့် ဂီတပညာရှင်တွေလည်း တော်တော်လေး စိတ်အား ထက်သန်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီပွဲ မပျက်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းရင်း …။
posted by မင်းနိုင်အောင် at 18:270Comments
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်ထံ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့က ညွှန်ကြားစာ ပို့ထားကြောင်း သိရသည်။
။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်များ ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း ရပ်ဆိုင်းထားရန်အတွက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်ထံ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့က ညွှန်ကြားစာ ပို့ထားကြောင်း သိရသည်။
ငွေကျပ် သိန်း ၇၀၀ နှင့် အဝတ်အထည်များ ပေးအပ်ပွဲနှင့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို တနင်္လာနေ့က ပြုလုပ်ရာ၌ ၎င်းစာအား ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလဂျွန်ငံဆိုင်းက ဖတ်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ဖို့အတွက် ဦးစီးဦးဆောင်တွေ အလုပ်လုပ်နေတာ ဖြစ်တယ်။ အချင်းချင်း အထင်မှားအမြင်မှားမဖြစ်ဖို့။” ဟု အခမ်းအနား တက်ရောက်သူ မြစ်ကြီးနားမြို့ခံတဦးက ဆိုသည်။
မိုးမောက်မြို့နယ် KIA တပ်မဟာ ၃ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၁၅ နယ်မြေအတွင်း ယနေ့ထိ တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်
ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်သည်ဟု KIO စစ်ဘက်သတင်းများအရ သိရသည်။
“ကွတ်ခိုင်နယ် ဟူးဖြတ်ဒေသဘက်မှာ လက်နက်အပြည့်ပါလာတဲ့ လားတွေနဲ့ စစ်သား ၁ဝဝ ကျော် တနေ့ကနေ ကျနော်တို့ ရင်း ၉ နယ်ဘက်ကို ဝင်လာနေတာဘဲ။ သမ္မတက စာပို့တယ်ဆိုရင်လည်း ဒီနေ့ ၁၂ ရက်လေ။ စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုက လုံးဝ မရပ်သေးဘူး။ ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ တပ်တွေဆုတ်တာ မရှိသေးဘူး။ အစိုးရက အမြဲတမ်း လိမ်နေ
တော့ ပြောတာနဲ့လုပ်တာ တခြားစီပဲ။”ဟု တပ်မဟာ ၄ တာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်ရော်က မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
posted by မင်းနိုင်အောင် at 18:160Comments
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မဟာချိုင်ဒေသရှိ ပင်လယ်စာ ထုတ်လုပ်နေသော စက်ရုံ တရုံ၌ ရောင်းစားခံထားရသည့် မြန်မာ
အမျိုးသမီး ၄ ဦးကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ထိုင်းအာဏာပိုင်များ အကူအညီဖြင့် ကယ်တင်ခဲ့ကြောင်း လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ဆောင်ရွက်နေသူများက ပြောသည်။
ကယ်တင်ထားသော အမျိုးသမီးများသည် အသက်၂၀ ကျော် အရွယ်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့ရန် လတ်တလော ဘန်ကောက် မြို့ရှိ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနတွင် ယာယီထိန်းသိမ်းထားသည်ဟု မဟာချိုင် အခြေစိုက် အလုပ်သမား အခွင့်အရေး မြှင့်တင် ရေးအဖွဲ့(LPN) မှ ဒါရိုက်တာ ဆွန်ဖွန် စခ၀ီက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယခင်လ အတွင်းက ထိုင်းနိုင်ငံ ချွန်ဘူရီမြို့နယ်တွင် ယင်း အမျိုးသမီးများ အပါအ၀င် ၃၉ ဦးခန့်သည် ထိုင်းအာဏာပိုင်များ၏ ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် အချုပ်ကားဖြင့် နယ်စပ်သို့ ပြန်ပို့ရန်အသွား လမ်းခုလပ်တွင် လူပွဲစားများထံ ရောင်းစားခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ပွဲစားတွေနဲ့ အချိတ်အဆက်လုပ်ပြီး ထောင်ကား မောင်းတဲ့ ရဲတယောက်က အဲဒီ ၃၉ ယောက်ကို နယ်စပ်ကို မပို့ဘဲနဲ့ လမ်းမှာ ဖြတ်ပြီးတော့ လက်ပြောင်း လက်လွှဲလုပ်လိုက်တယ်”ဟု ဘန်ကောက်မြို့တွင် အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေသော ကိုဖိုးခွား က ရှင်းပြသည်။
ထို ၃၉ ဦးထဲမှ အမျိုးသားများသည် ငါးဖမ်း လုပ်ငန်းများ၌ ရောင်းစားခံရပြီး အမျိုးသမီးတချို့မှာ ပင်လယ်စာ ထုတ်လုပ်နေ သော စက်ရုံသို့ ရောင်းစားခံရကြောင်း၊ တဦးလျှင် ဘတ်ငွေ ၁၁၀၀၀ ခန့်ဖြင့် ရောင်းစားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရောင်းစားခံ အမျိုးသမီး များက အကူအညီ တောင်းခဲ့သောကြောင့် မဟာချိုင်ဒေသရှိ ထိုင်းအာဏာပိုင်များနှင့်ပူးပေါင်း၍ သွားရောက်ကယ်တင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ် ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ထိုင်းအာဏာပိုင်များ၏ အဆိုအရ ထောင်ကားမောင်းသည့် ရဲဝန်ထမ်းနှင့် နယ်စပ်ရှိ ဖမ်းဆီးခံရသည့် မြန်မာ အလုပ်သမားများ ကို လက်ခံမည့် လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးဌာန(လ၀က) အာဏာပိုင်များအကြား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်မည်ဟု သိရသည်။
ပြီးခဲ့သော ဇွန်လအတွင်းက ထိုင်းနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဆူဖန်ဘူရီခရိုင်တွင် ထိုင်းအာဏာပိုင်များနှင့် မြန်မာ အလုပ်သမားအရေး ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေသူများပူးပေါင်းပြီး လူကုန်ကူးသည့် အဖွဲ့တဖွဲ့ကို ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးကာ လူကုန်ကူးခံရသူ မြန်မာ ၅၇ ဦးကို ကယ်တင်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သည့် မတ်လ၂၈ ရက်နေ့ကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း လဗ်ဘူရီခရိုင် ဘန်ချာမြို့နယ်အတွင်းရှိ VAK နာနတ်သီး စက်ရုံမှ မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးပြီးနောက် နယ်စပ်သို့ ပြန်ပို့ခံရသည့် ၂၁၆ ဦးထဲမှ ၉ ဦးအား ပွဲစား တဦးက ချွန်ဘူရီလှေဆိပ်၌ ရောင်းစားမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုသို့ ရောင်းစားခံရသော မြန်မာနိုင်ငံသား ၉ ဦးသည် ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့မြေနီကုန်း ရပ်ကွက်မှ ဒေသခံများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများ လူကုန်ကူး ခံရနေခြင်းသည် စီးပွားရေးကျပ်တည်းပြီး အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမှုကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ၀ါရှင် တန် အခြေစိုက် လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့က ဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာ အလုပ်သမားများကို အကူအညီပေးနေသော World Vision အဖွဲ့ကလည်း အာရှနိုင်ငံများတွင် လူကုန် ကူးမှုများရှိသော်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလလယ်တွင် ထိုင်းနှင့် မြန်မာ လူကုန်ကူးမှုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို နှစ်နိုင်ငံ တာဝန်ရှိသူများက လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ဘန်ကောက်မြို့အပါအ၀င် ထိုင်းနိုင်ငံ တ၀န်းတွင် မြန်မာပြည်သား အလုပ်သမား စုစုပေါင်း ၂ သန်းမှ ၄ သန်း အထိရှိသည်ဟု အလုပ်သမားအဖွဲ့များက ခန့်မှန်းထားကြသည်။
posted by မင်းနိုင်အောင် at 22:500Comments
ကျောက်ဖြူမြို့ လုပ်ငန်းခွင်ကြောင့် ပျက်စီးနေသော လမ်းများကို ပြင်ဆင်ပေးရန် ပြည်နယ် အစိုးရထံ တိုင်ကြားထားကြကြောင်း ဒေသခံတို့က ပြောသည်။
ရွှေသဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်း၏ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့ လုပ်ငန်းခွင်ကြောင့် ပျက်စီးနေသော လမ်းများကို ပြင်ဆင်ပေးရန် ပြည်နယ် အစိုးရထံ တိုင်ကြားထားကြကြောင်း ဒေသခံတို့က ပြောသည်။
ပိုက်လိုင်းတင် ကားကြီးများ နေ့စဉ်သွားလာမှုကြောင့် ပျက်စီးရခြင်း ဖြစ်ပြီး ထိုလမ်းများတွင် မတော်တဆမှု မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ကျောက်ဖြူမြို့မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘရှိန်က ပြောသည်။
ဂက်စ်ပိုက်လိုင်း တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်း နယ်မြေတခု မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ - ရွှေ သဘာဝ လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့)
“လမ်းတွေ ပျက်စီးကုန်တဲ့ အတွက် ဆိုင်ကယ်တွေ မတော်တဆမှုတွေ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတာတွေ တွေ့နေရတော့ ၀န်ကြီးဦးသန်းဌေးကိုရော ဗဟိုအစိုးရအဖွဲ့ဝင် တချို့ကိုပါ ပြောဆို တင်ပြတော့ ဆောင်ရွက်ပေးမယ် ပြောပေမယ့် လက်တွေ့က ဖြစ်မလာဘူး” ဟု ဦးဘရှိန်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်များ၌ ဖြစ်ပွားနေသည့် ပြဿနာများကို အရေး မယူခြင်း၊ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှု ဆက်လက် ရှိနေခြင်း တို့ကို ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တွေ့မြင်နေရကြောင်း၊ ဗဟိုအစိုးရကလည်း စနစ်တကျ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်နေကြောင်း ဦးဘရှိန်က ထောက်ပြသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိသေးဘူး၊ အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်မယ်လို့ သမ္မတက ပြောတာကို ၀န်ကြီးအဆင့်က လိုက်နာဖို့ လိုတယ်၊ မလိုက်နာရင် ၀န်ကြီးလည်းပဲ အရေးယူဖို့ လိုမယ်၊ ၀န်ကြီး အဆင့်ကို အရေးမယူရင် အောက်ခြေ အဆင့် အာဏာပိုင်တွေကလည်းပဲ အာဏာအလွဲသုံးစား လုပ်နေကြဦးမှာပါ” ဟု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် နှင့်ရှေ့နေ တဦး ဖြစ်သူ ဦးဘရှိန်က ဆိုသည်။
ပျက်စီးနေသောလမ်းများကို အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးစေလိုသည်ဟု ဒေသခံတို့က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“ဆိုင်ကယ်၊ ဆိုက်ကား၊ စက်ဘီး၊ နွားလှည်းက အစ သွားလို့ မရတော့ပါဘူး၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် တ၀ိုက် ၁၀ မိုင် ၀န်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ ကားလမ်း အားလုံး နီးပါး ပျက်သွားပါပြီ၊ ချိုင့်ခွက်တွေ ဖြစ်သွားတော့ လူတွေတောင် ည ၆ နာရီ ဆိုရင် အဲဒီ လမ်းတွေမှာ လမ်းလျှောက်လို့ မရတော့ဘူး” ဟု ဂုံးချိန် ရွာသား တဦးက ဆိုသည်။
လမ်းပျက်စီးမှုအတွက် တာဝန်ရှိသော ပိုက်လိုင်း သယ်ယူ ပို့ဆောင်နေသည့် ပါရမီကုမ္ပဏီတွင် လက်ရှိ စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဦးသန်းဌေး၊ ၀န်ကြီးဟောင်း ဦးလွန်းသီတို့၏ သားသမီးများ ပါဝင်နေသည့် အတွက် ပြည်နယ် အစိုးရက အရေးယူရန် ၀န်လေးနေခြင်း ဖြစ်ပုံရကြောင်း ကျောက်ဖြူ ဒေသခံများက ပြောသည်။
“ပြည်နယ် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဦးကျော်ခင်ကို ဒေသခံတွေက စုပြီး တိုင်ကြတယ်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ၀န်ကြီး သားသမီးတွေ ပိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ ဖြစ်နေတော့ သူ့မှာ ပြောဆိုခွင့်၊ ဖြေရှင်းပေးပိုင်ခွင့် မရှိဘူးလို့ သိရတယ်” ဟု ဒေသခံ တဦးက ဆိုသည်။
ကျောက်ဖြူ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်း၊ ဂက်စ်ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော လုပ်ငန်းခွင် တချို့၌ မြန်မာနိုင်ငံမှ အေးရှားဝေါလ်၊ သန္တာနဂါး၊ မြန်မာ့ရွှေသရဖူ၊ 7-Star, PSC, Myint and Association စသည့် ကုမ္ပဏီများက တည်ဆောက်ရေး လုပ်ဆောင်နေကြသည်။
ဂက်စ်ပိုက်လိုင်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မကွေးတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တို့ကိုဖြတ်၍ တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွယ်တန်းမည်ဖြစ်ကာ ကီလိုမီတာ ၂၈၀၀ ၀န်းကျင် ရှည်လျားသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းရာ သီပေါနှင့် ကျောက်မဲ မြို့နယ်တို့မှ လယ်သိမ်းခံထားရသော လယ်သမားများ လျော်ကြေးငွေကို အပြည့်အ၀ မရသေးကြောင်း ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းကို စောင့်ကြည့်နေသည့် ရွှေဂက်စ်လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့မှ ဂျက်စမင်း က ပြောသည်။
“တချို့ဒေသတွေက တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ နေရာဆိုတော့ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမယ် ဆိုတာ မပြောနိုင်တဲ့အတွက် လျော်ကြေးကို တ၀က်ပဲ ပေးတာပါ၊ တရုတ်ပြည်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ နေရာတွေမှာတော့ လျော်ကြေး အပြည့် ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်” ဟု ဂျက်စမင်းက ဆိုသည်။
posted by မင်းနိုင်အောင် at 22:490Comments